October 2017 | Language Century Language Century
9:42 PM C-Dialogue , Chinese
ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားပြောပုံစံလေး တစ်ခုကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့နော်။
☞ Xiǎo Zhāng, Hángzhōu gōngsī nàbiān yǒu ge huìyì xūyào zǒngbù de rén cānjiā, máfan nǐ pǎo yí tàng.
☞ ရှောင်ကျန်းh(င်) ဟန်(င်)ကျိုးhကုံး(င်)စီးနာ့ပြန်း ယိုကဲာ့ဟွေ့ယိ ရွှီးယောက် ဇုံz(င်)ပုတဲ့ရဲင်rဆန်းကျား မားဖန်းfနီ ဖောင်ပုယီထန့်(င်)
☞ ရှောင်ကျန်းရေ၊ ဟန်ကျိုးကုမ္ပဏီက အစည်းအဝေးကို ရုံးချုပ်က တစ်ယောက်ယောက် သွားတက်ဖို့လိုနေလို့ မင်းပဲ ပြေးလိုက်ပါအုံးကွာ။
☞ Hǎo de. Huìyì shì shénme shíhou?
☞ ဟောင်တဲ့ ဟွေ့ယိရှစ်h ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့
☞ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ အစည်းအဝေးက ဘယ်တော့လဲ။
☞ Xià ge yuè yī hào. Děng huìr wǒ bǎ huìyì de yóujiàn zhuǎnfā gěi nǐ.
☞ ရှာ့ကဲာ့ယွဲ့ ယီးဟောက် တဲင်(င်)ဟွေ့r ဝေါပါဟွေ့ယိတဲ့ ယိုကျန့် ကျွမ်hဖားfကေးနီ
☞ လာမယ့်လ တစ်ရက်နေ့ပါ။ ခဏနေရင် အစည်းအဝေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီးမေးလ်ကို ငါမင်းဆီ ပို့ပေးလိုက်မယ်။
☞ Hǎo de, xièxie Wángzǒng.
☞ ဟောင်တဲ့ ရှဲ့ရှဲ့ ဝမ်း(င်)ဇုံz(င်)
☞ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးပါ မန်နေဂျာ 'ဝမ်'။
ရုံးပိုငျးဆိုငျရာတှမှော ပွောလရှေိ့တဲ့ စကားပွောပုံစံလေး တဈခုကို လလေ့ာကွညျ့ကွပါစို့နျော။
☞ ရှောငျကနျြးh(ငျ) ဟနျ(ငျ)ကြိုးhကုံး(ငျ)စီးနာ့ပွနျး ယိုကဲာ့ဟှယေိ့ ရှီးယောကျ ဇုံz(ငျ)ပုတဲ့ရဲငျrဆနျးကြား မားဖနျးfနီ ဖောငျပုယီထနျ့(ငျ)
☞ ရှောငျကနျြးရေ၊ ဟနျကြိုးကုမ်ပဏီက အစညျးအဝေးကို ရုံးခြုပျက တဈယောကျယောကျ သှားတကျဖို့လိုနလေို့ မငျးပဲ ပွေးလိုကျပါအုံးကှာ။
☞ ဟောငျတဲ့ ဟှယေိ့ရှဈh ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့
☞ ဟုတျကဲ့ပါ၊ အစညျးအဝေးက ဘယျတော့လဲ။
☞ ရှာ့ကဲာ့ယှဲ့ ယီးဟောကျ တဲငျ(ငျ)ဟှေ့r ဝေါပါဟှယေိ့တဲ့ ယိုကနျြ့ ကြှမျhဖားfကေးနီ
☞ လာမယျ့လ တဈရကျနပေ့ါ။ ခဏနရေငျ အစညျးအဝေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အီးမေးလျကို ငါမငျးဆီ ပို့ပေးလိုကျမယျ။
☞ ဟောငျတဲ့ ရှဲ့ရှဲ့ ဝမျး(ငျ)ဇုံz(ငျ)
☞ ဟုတျကဲ့၊ ကြေးဇူးပါ မနျနဂြော 'ဝမျ'။
9:37 PM C-Dialogue , Chinese
ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ဖုန်းဆင်းကဒ်တွေက ဈေးပေါသွားသလို package တွေကိုလည်း မိမိကြိုက်သလို ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ ရပါတယ်။
☞ Nín hǎo, qǐng wèn nín yào bàn shénme yèwù?
☞ နင်းဟောင် ချင်(င်)ဝဲင့် နင်ယောက်ပန့် ရှဲhမဲာ့ယဲ့ဝု
☞ မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျား ဘာများအလိုရှိပါသလဲ။
☞ Wǒ xiǎng bàn yí ge shǒujī hàomǎ.
☞ ဝေါရှန်(င်)ပန့် ယီကဲာ့ရှိုhကျီးဟောက်မာ
☞ ကျွန်တော် ဖုန်းနံပါတ် ဝယ်ချင်လို့ပါ။
☞ Hǎo de, nín kěyǐ cóng zhèxiē hàomǎ lǐ xuǎn.
☞ ဟောင်တဲ့ နင်ခဲယ်းယီ ဆုံ(င်)ကျဲ့hရှဲဟောက်မာလီရွှမ်
☞ ကောင်းပါပြီ၊ ဒီနံပါတ်တွေထဲကနေ ခင်ဗျား ရွေးလို့ရပါတယ်။
☞ Wǒ xuǎn zhè ge.
☞ ကျွန်တော် ဒီဟာယူလိုက်မယ်။
☞ Nín yào shénme tàocān ne?
☞ နင်ယောက် ရှဲhမဲာ့ထောက်ဆန်းနဲ
☞ ခင်ဗျား ဘာ package ယူမလဲ။
☞ Wǒ yào shàngwǎng liúliàng duō yìdiǎn de.
☞ ဝေါ်ယောက် ရှန့်h(င်)ဝမ်(င်)လျိုလျန့် တောယိတျန်တဲ့
☞ ကျွန်တော်က အင်တာနက်ဒေတာ နည်းနည်းများတဲ့ဟာ ယူမယ်။
☞ Nà zhè ge tàocān shìhé nín, yí jì liúliàng hé yì bǎi fēnzhōng diànhuà zhǐ yào jiǔ shí bā yuán.
☞ နာ့ ကျဲ့hကဲာ့ထောက်ဆန်း ရှစ်hဟဲယ်းနင် ယီကျိလျိုလျန့်(င်)ဟဲယ် ယိပိုင်ဖဲင်းfကျုံးh(င်)တျန့်ဟွာ့ ကျီhယောက် ကျိုရှီhပါးယွမ်
☞ ဒါဆိုရင် ဒီ package က ခင်ဗျားနဲ့ကိုက်တယ်၊ ဒေတာ 1G နဲ့ မိနစ် ၁၀၀ ဖုန်းဘေလ်ကို ၈၉ ယွမ်ပဲ ကျပါတယ်။
☞ Yí jì tài shǎo le, yǒu liúliàng gèng duō yìdiǎn de ma?
☞ ယီကျိ ထိုက်ရှောင်hလဲာ့ ယိုလျိုလျန့်(င်) ကဲင့်(င်)တောယိတျန်တဲ့မား
☞ 1G က နည်းလွန်းတယ်၊ ဒေတာ နည်းနည်းပိုများတာ ရှိလား။
☞ Wǒmen hái yǒu zhè ge yì bǎi liù shí bā yuán de tàocān, lǐmiàn yǒu liǎng jì liúliàng hé liǎng bǎi fēnzhōng diànhuà.
☞ ဝေါ်မဲင်းဟိုင်းယို ကျဲ့hကဲာ့ ယိပိုင်လျို့ရှီhပါးယွမ်တဲ့ ထောက်ဆန်း လီမြန့်ယို လျန်(င်)ကျိလျိုလျန့်ဟဲယ် လျန်း(င်)ပိုင်ဖဲင်းfကျုံးh(င်)တျန့်ဟွာ့
☞ ကျွန်တော်တို့မှာ ၁၆၈ ယွမ်တန် ဒီ package တစ်ခု ရှိသေးတယ်၊ အထဲမှာ ဒေတာ 2G နဲ့ မိနစ် ၂၀၀ ဖုန်းဘေလ် ပါပါတယ်။
☞ Hǎo, jiù yào zhè ge ba.
☞ ဟောင် ကျို့ယောက်ကျဲ့hကဲာ့ပါ့
☞ ကောင်းပါပြီ၊ ဒီဟာပဲ ယူတော့မယ်။
☞ Hǎo de, nín dài shēnfènzhèng huòzhě hùzhào le ma?
☞ ဟောင်တဲ့ နင်တိုက်ရှဲင်းhဖဲင့်fကျဲင့်h(င်) ဟော့ကျယ်h ဟုကျောက်hလဲာ့မား
☞ ကောင်းပြီလေ၊ ခင်ဗျားမှာ မှတ်ပုံတင် ဒါမှမဟုတ် ပတ်စ်ပို့ ပါလာလား။
☞ Dài le, zhè shì wǒ de hùzhào.
☞ တိုက်လဲာ့ ကျဲ့hရှစ်h ဝေါ်တဲ့ဟုကျောက်h
☞ ပါပါတယ်၊ ဒါက ကျွန်တော့ရဲ့ ပတ်စ်ပို့ပါ။
☞ Hǎo, qǐng shāoděng. Zhè shì nín gòu mǎi de shǒujī hàomǎ hé tàocān xìnxī, nín kàn kan yǒu méiyǒu wèntí. Rúguǒ méiyǒu wèntí, qǐng zài zhèlǐ qiānzì.
☞ ဟောင် ချင်(င်)ရှောင်းhတဲင်(င်) ကျဲ့hရှစ်h နင်ကို့မိုင်တဲ့ ရှိုhကျီးဟောက်မာဟဲယ် ထောက်ဆန်းရှင့်ရှီး နင်ခန့်ခန့် ယိုမေးယိုဝဲင့်ထီ ရူးrကော် မေးယိုဝဲင့်ထီ ချင်(င်)ဇိုက်zကျဲ့hလီ ချန်းဇစ်z
☞ ကောင်းပါပြီ၊ ခဏစောင့်ပါနော်။ ဒါက ခင်ဗျား ဝယ်လိုက်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဒေတာအချက်အလက်တွေပါ၊ ပြဿနာရှိမရှိ ခင်ဗျားကြည့်လိုက်ပါ။ တကယ်လို့ ပြဿနာမရှိရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီမှာ လက်မှတ်ထိုးပါ။
☞ Méiyǒu wèntí, qiān hǎo le.
☞ မေးယိုဝဲင့်ထီ ချန်းဟောင်လဲာ့
☞ ပြဿနာ မရှိပါဘူး၊ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါပြီ။
☞ Hàomǎ shí yuán, tàocān yì bǎi liù shí bā yuán, yígòng yì bǎi qī shí bā yuán.
☞ ဟောက်မာ ရှီးhယွမ် ထောက်ဆန်း ယိပိုင်လျို့ရှီhပါးယွမ် ယီကုံ့(င်) ယိပိုင်ချီးရှီhပါးယွမ်
☞ နံပါတ်က ၁၀ ယွမ်ပါ၊ package က ၁၆၈ ယွမ်ပါ၊ စုစုပေါင်း ၁၇၈ ယွမ်ပါ။
☞ ရော့၊ ဒီမှာပါ။
☞ Hǎo de, zhè shì nín de shǒujīkǎ.
☞ ဟောင်တဲ့ ကျဲ့hရှစ်h နင်တဲ့ရှိုhကျီးခါ
☞ ကောင်းပါပြီ၊ ဒါက ခင်ဗျားရဲ့ ဖုန်းကဒ်ပါ။
☞ Bú kè qì, zàijiàn.
☞ ပူခဲါ့ချိ ဇိုက်zကျန့်
☞ ရပါတယ်၊ ဘိုင့်ဘိုင်။
ဒီနခေ့တျေမှာတော့ ဖုနျးဆငျးကဒျတှကေ ဈေးပေါသှားသလို package တှကေိုလညျး မိမိကွိုကျသလို ရှေးခယျြဝယျယူလို့ ရပါတယျ။
☞ နငျးဟောငျ ခငျြ(ငျ)ဝဲငျ့ နငျယောကျပနျ့ ရှဲhမဲာ့ယဲ့ဝု
☞ မင်ျဂလာပါ၊ ခငျဗြား ဘာမြားအလိုရှိပါသလဲ။
☞ ဝေါရှနျ(ငျ)ပနျ့ ယီကဲာ့ရှိုhကြီးဟောကျမာ
☞ ကြှနျတျော ဖုနျးနံပါတျ ဝယျခငျြလို့ပါ။
☞ ဟောငျတဲ့ နငျခဲယျးယီ ဆုံ(ငျ)ကြဲ့hရှဲဟောကျမာလီရှမျ
☞ ကောငျးပါပွီ၊ ဒီနံပါတျတှထေဲကနေ ခငျဗြား ရှေးလို့ရပါတယျ။
☞ ကြှနျတျော ဒီဟာယူလိုကျမယျ။
☞ နငျယောကျ ရှဲhမဲာ့ထောကျဆနျးနဲ
☞ ခငျဗြား ဘာ package ယူမလဲ။
☞ ဝျေါယောကျ ရှနျ့h(ငျ)ဝမျ(ငျ)လြိုလနျြ့ တောယိတနျြတဲ့
☞ ကြှနျတျောက အငျတာနကျဒတော နညျးနညျးမြားတဲ့ဟာ ယူမယျ။
☞ နာ့ ကြဲ့hကဲာ့ထောကျဆနျး ရှဈhဟဲယျးနငျ ယီကြိလြိုလနျြ့(ငျ)ဟဲယျ ယိပိုငျဖဲငျးfကြုံးh(ငျ)တနျြ့ဟှာ့ ကြီhယောကျ ကြိုရှီhပါးယှမျ
☞ ဒါဆိုရငျ ဒီ package က ခငျဗြားနဲ့ကိုကျတယျ၊ ဒတော 1G နဲ့ မိနဈ ၁၀၀ ဖုနျးဘလျေကို ၈၉ ယှမျပဲ ကပြါတယျ။
☞ ယီကြိ ထိုကျရှောငျhလဲာ့ ယိုလြိုလနျြ့(ငျ) ကဲငျ့(ငျ)တောယိတနျြတဲ့မား
☞ 1G က နညျးလှနျးတယျ၊ ဒတော နညျးနညျးပိုမြားတာ ရှိလား။
☞ ဝျေါမဲငျးဟိုငျးယို ကြဲ့hကဲာ့ ယိပိုငျလြို့ရှီhပါးယှမျတဲ့ ထောကျဆနျး လီမွနျ့ယို လနျြ(ငျ)ကြိလြိုလနျြ့ဟဲယျ လနျြး(ငျ)ပိုငျဖဲငျးfကြုံးh(ငျ)တနျြ့ဟှာ့
☞ ကြှနျတျောတို့မှာ ၁၆၈ ယှမျတနျ ဒီ package တဈခု ရှိသေးတယျ၊ အထဲမှာ ဒတော 2G နဲ့ မိနဈ ၂၀၀ ဖုနျးဘလျေ ပါပါတယျ။
☞ ဟောငျ ကြို့ယောကျကြဲ့hကဲာ့ပါ့
☞ ကောငျးပါပွီ၊ ဒီဟာပဲ ယူတော့မယျ။
☞ ဟောငျတဲ့ နငျတိုကျရှဲငျးhဖဲငျ့fကြဲငျ့h(ငျ) ဟော့ကယျြh ဟုကြောကျhလဲာ့မား
☞ ကောငျးပွီလေ၊ ခငျဗြားမှာ မှတျပုံတငျ ဒါမှမဟုတျ ပတျဈပို့ ပါလာလား။
☞ တိုကျလဲာ့ ကြဲ့hရှဈh ဝျေါတဲ့ဟုကြောကျh
☞ ပါပါတယျ၊ ဒါက ကြှနျတော့ရဲ့ ပတျဈပို့ပါ။
☞ ဟောငျ ခငျြ(ငျ)ရှောငျးhတဲငျ(ငျ) ကြဲ့hရှဈh နငျကို့မိုငျတဲ့ ရှိုhကြီးဟောကျမာဟဲယျ ထောကျဆနျးရှငျ့ရှီး နငျခနျ့ခနျ့ ယိုမေးယိုဝဲငျ့ထီ ရူးrကျော မေးယိုဝဲငျ့ထီ ခငျြ(ငျ)ဇိုကျzကြဲ့hလီ ခနျြးဇဈz
☞ ကောငျးပါပွီ၊ ခဏစောငျ့ပါနျော။ ဒါက ခငျဗြား ဝယျလိုကျတဲ့ ဖုနျးနံပါတျနဲ့ ဒတောအခကျြအလကျတှပေါ၊ ပွဿနာရှိမရှိ ခငျဗြားကွညျ့လိုကျပါ။ တကယျလို့ ပွဿနာမရှိရငျ ကြေးဇူးပွုပွီး ဒီမှာ လကျမှတျထိုးပါ။
☞ မေးယိုဝဲငျ့ထီ ခနျြးဟောငျလဲာ့
☞ ပွဿနာ မရှိပါဘူး၊ လကျမှတျထိုးလိုကျပါပွီ။
☞ ဟောကျမာ ရှီးhယှမျ ထောကျဆနျး ယိပိုငျလြို့ရှီhပါးယှမျ ယီကုံ့(ငျ) ယိပိုငျခြီးရှီhပါးယှမျ
☞ နံပါတျက ၁၀ ယှမျပါ၊ package က ၁၆၈ ယှမျပါ၊ စုစုပေါငျး ၁၇၈ ယှမျပါ။
☞ ရော့၊ ဒီမှာပါ။
☞ ဟောငျတဲ့ ကြဲ့hရှဈh နငျတဲ့ရှိုhကြီးခါ
☞ ကောငျးပါပွီ၊ ဒါက ခငျဗြားရဲ့ ဖုနျးကဒျပါ။
☞ ပူခဲါ့ခြိ ဇိုကျzကနျြ့
☞ ရပါတယျ၊ ဘိုငျ့ဘိုငျ။
12:43 AM C-Text , Chinese
အခမ်းအနားပွဲ တခုခုကျင်းပတော့မယ်ဆိုရင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေတွေကို ဖိတ်စာလေးတွေ ပို့လေ့ရှိပါတယ်။ နမူနာ ဖိတ်စာတစ်စောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်က နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်၊
အဲဒီနေ့ မနက် ၉ နာရီမှာ ကျွန်တော်တို့ဆိုင် တတိယထပ်မှာ ဖုန်းပြပွဲ ကျင်းပပါ့မယ်၊
၁၂ နာရီ မိန်းယွမ်ဟော်တယ်မှာ ကျွေးမွေးဧည့်ခံပွဲကျင်းပပါ့မယ်။
ကြွရောက်အားပေးပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့
☞ ဝေါဟာရများ ☜
1. 邀请 [ yāoqǐng ] ဖိတ်ကြားသည်
2. 信 [ xìn ] စာ
3. 王先生 [ Wáng xiānsheng ] မစ္စတာဝမ်
4. 店 [ diàn ] ဆိုင်
5. 定于 [ dìngyú ] ဆုံးဖြတ်သည်
6. 正式 [ zhèngshì ] ပုံမှန်။ တရားဝင်
7. 开业 [ kāiyè ] လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်သည်
8. 当天 [ dàngtiān ] ၄င်းနေ့။ ထိုနေ့
9. 三楼 [sānlóu ] တတိယထပ်
10. 举行 [ jǔxíng ] ကျင်းပသည်
11. 手机展 [ shǒujīzhǎn ] ဖုန်းပြပွဲ
12. 明园 [ Míngyuán ] ဟော်တယ်အမည်
13. 酒店 [ jiǔdiàn ] ဟော်တယ်
14. 宴会 [ yànhuì ] ကျွေးမွေးဧည့်ခံပွဲ
15. 敬请 [ jìngqǐng ] ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်
16. 光临 [ guānglín ] ကြွရောက်ခြင်း
17. 长城 [ Chángchéng ] ဂရိတ်ဝေါ
18. 手机店 [ shǒujīdiàn ] ဖုန်းဆိုင်
အခမျးအနားပှဲ တခုခုကငျြးပတော့မယျဆိုရငျ လုပျဖျောကိုငျဖကျ မိတျဆှတှေကေို ဖိတျစာလေးတှေ ပို့လရှေိ့ပါတယျ။ နမူနာ ဖိတျစာတဈစောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
မင်ျဂလာပါ။ ကြှနျတျောတို့ဆိုငျက နိုဝငျဘာလ ၁ ရကျနေ့ မနကျ ၈ နာရီမှာ စတငျဖှငျ့လှဈဖို့ စီစဉျထားပါတယျ၊
အဲဒီနေ့ မနကျ ၉ နာရီမှာ ကြှနျတျောတို့ဆိုငျ တတိယထပျမှာ ဖုနျးပွပှဲ ကငျြးပပါ့မယျ၊
၁၂ နာရီ မိနျးယှမျဟျောတယျမှာ ကြှေးမှေးဧညျ့ခံပှဲကငျြးပပါ့မယျ။
ကွှရောကျအားပေးပါရနျ လေးစားစှာ ဖိတျကွားပါတယျ။
၂၀၁၇ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနေ့
☞ ဝေါဟာရမြား ☜
1. 邀请 [ yāoqǐng ] ဖိတျကွားသညျ
3. 王先生 [ Wáng xiānsheng ] မစ်စတာဝမျ
4. 店 [ diàn ] ဆိုငျ
5. 定于 [ dìngyú ] ဆုံးဖွတျသညျ
6. 正式 [ zhèngshì ] ပုံမှနျ။ တရားဝငျ
7. 开业 [ kāiyè ] လုပျငနျး စတငျလုပျကိုငျသညျ
8. 当天 [ dàngtiān ] ၎င်းငျးနေ့။ ထိုနေ့
9. 三楼 [sānlóu ] တတိယထပျ
10. 举行 [ jǔxíng ] ကငျြးပသညျ
11. 手机展 [ shǒujīzhǎn ] ဖုနျးပွပှဲ
12. 明园 [ Míngyuán ] ဟျောတယျအမညျ
13. 酒店 [ jiǔdiàn ] ဟျောတယျ
14. 宴会 [ yànhuì ] ကြှေးမှေးဧညျ့ခံပှဲ
15. 敬请 [ jìngqǐng ] ရိုသလေေးစားစှာဖွငျ့
16. 光临 [ guānglín ] ကွှရောကျခွငျး
17. 长城 [ Chángchéng ] ဂရိတျဝေါ
18. 手机店 [ shǒujīdiàn ] ဖုနျးဆိုငျ
ဖိတ်စာ - ဖိတ်ကြားလွှာ - ဖိတ်ကြားခြင်း - ဖိတျစာ - ဖိတျကွားလှာ - ဖိတျကွားခွငျး - invite - Invite - invitation - Invitation - invitation letter - invitation card
12:38 AM C-Dialogue , Chinese
ညနေစာ အတူတူသွားစားကြဖို့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ချိန်းဆိုပြီး နေရာရွေးကြတဲ့ စကားပြောပုံစံလေးကို လေ့လာကြပါစို့။
☞ Nǐ xiǎng hé wǒ gòngjìn wǎncān ma?
☞ နီးရှန်(င်)ဟဲယ်းဝေါ် ကုံ့(င်)ကျင့်ဝမ်ဆန်းမား
☞ မင်း ငါနဲ့အတူ ညစာလိုက်စားမလား။
☞ Hǎo wa, búcuò. Nǐ xiǎng shénme shíhou qù ne?
☞ ဟောင်ဝါး ပူဆော့ နီးရှန်(င်) ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ချွိနဲ
☞ ကောင်းတာပေါ့၊ မင်း ဘယ်ချိန်သွားချင်တာလဲ။
☞ Jīntiān kěyǐ ma?
☞ ကျင်းထျန်း ခဲယ်းယီမား
☞ ဒီနေ့ အဆင်ပြေမလား။
☞ Hěn bàoqiàn, jīntiān bù xíng.
☞ ဟဲင်ပေါက်ချန့် ကျင်းထျန်း ပုရှင်(င်)
☞ ဆောရီးကွာ၊ ဒီနေ့ မဖြစ်ဘူး။
☞ Nà míngtiān wǎnshang ne?
☞ နာ့ မျင်(င်)ထျန်းဝမ်ရှန့်h(င်)နဲ
☞ Hǎode, shénme shíjiān?
☞ ဟောင်တဲ့ ရှဲhမဲာ့ရှီhကျန်း
☞ ကောင်းပြီလေ၊ ဘယ်ချိန်လဲ။
☞ Wǎnshang jiǔ diǎn kěyǐ ma?
☞ ဝမ်ရှန့်h(င်)ကျိုးတျန် ခဲယ်းယီမား
☞ ည ၉ နာရီ ဖြစ်မလား။
☞ Wǒ juéde tài wǎn la.
☞ ဝေါ်ကျွယ်တဲ့ ထိုက်ဝမ်လား
☞ သိပ်မိုးချုပ်မယ် ထင်တယ်။
☞ Nà wǎnshang liù diǎn ne?
☞ နာ့ ဝမ်ရှန့်h(င်)လျို့တျန်နဲ
☞ ဒါဆို ညနေ ၆ နာရီရော။
☞ Hǎode, nàyàng hěn hǎo. Nǐ xiǎng qù nǎr ne?
☞ ဟောင်တဲ့ နာ့ယန့်(င်)ဟဲင်းဟောင် နီးရှန်(င်)ချွိနာrနဲ
☞ အင်း၊ အဲဒီလို ကောင်းတယ်၊ မင်း ဘယ်သွားချင်တာလဲ။
☞ Zài wǔ dàjiē de Yìdàlì cāntīng zěnmeyàng?
☞ ဇိုက်zဝူတာ့ကျဲတဲ့ ယိတာ့လိဆန်းထင်း(င်) ဇဲင်zမဲာ့ယန့်(င်)
☞ ၅ လမ်းက အီတလီစားသောက်ဆိုင်ဆို ဘယ်လိုလဲ။
☞ Ò, wǒ bù xǐhuan nà jiā cāntīng, wǒ bù xiǎng qù nàr.
☞ အော့ ဝေါ်ပုရှီဟွမ်း နာ့ကျားဆန်းထင်း(င်) ဝေါ်ပုရှန်(င်) ချွိနာ့r
☞ အိုး၊ ငါ အဲဒီစားသောက်ဆိုင်ကို မကြိုက်ဘူး၊ ငါ အဲဒီကို မသွားချင်ဘူး။
☞ Nà āi zhe tā de nà ge Hánguó cāntīng zěnmeyàng?
☞ နာ့ အိုင်းကျယ်hထားတဲ့ နာ့ကဲာ့ဟန်းကော်ဆန်းထင်း(င်) ဇဲင်zမဲာ့ယန့်(င်)
☞ ဒါဆိုရင် အဲဒါနဲ့ကပ်လျက် ကိုရီးယား စားသောက်ဆိုင်ဆိုရင် ဘယ်လိုလဲ။
☞ Hǒode, wǒ xǐhuan nà ge dìfāng.
☞ ဟောင်တဲ့ ဝေါရှီဟွမ်း နာ့ကဲာ့တိဖန်းf(င်)
☞ ကောင်းပြီလေ၊ ငါ အဲဒီနေရာကို ကြိုက်ပါတယ်။
ညနစော အတူတူသှားစားကွဖို့ သူငယျခငျြးနဲ့ ခြိနျးဆိုပွီး နရောရှေးကွတဲ့ စကားပွောပုံစံလေးကို လလေ့ာကွပါစို့။
☞ နီးရှနျ(ငျ)ဟဲယျးဝျေါ ကုံ့(ငျ)ကငျြ့ဝမျဆနျးမား
☞ မငျး ငါနဲ့အတူ ညစာလိုကျစားမလား။
☞ ဟောငျဝါး ပူဆော့ နီးရှနျ(ငျ) ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ခြှိနဲ
☞ ကောငျးတာပေါ့၊ မငျး ဘယျခြိနျသှားခငျြတာလဲ။
☞ ကငျြးထနျြး ခဲယျးယီမား
☞ ဒီနေ့ အဆငျပွမေလား။
☞ ဟဲငျပေါကျခနျြ့ ကငျြးထနျြး ပုရှငျ(ငျ)
☞ ဆောရီးကှာ၊ ဒီနေ့ မဖွဈဘူး။
☞ နာ့ မငျြ(ငျ)ထနျြးဝမျရှနျ့h(ငျ)နဲ
☞ ဟောငျတဲ့ ရှဲhမဲာ့ရှီhကနျြး
☞ ကောငျးပွီလေ၊ ဘယျခြိနျလဲ။
☞ ဝမျရှနျ့h(ငျ)ကြိုးတနျြ ခဲယျးယီမား
☞ ည ၉ နာရီ ဖွဈမလား။
☞ ဝျေါကြှယျတဲ့ ထိုကျဝမျလား
☞ သိပျမိုးခြုပျမယျ ထငျတယျ။
☞ နာ့ ဝမျရှနျ့h(ငျ)လြို့တနျြနဲ
☞ ဒါဆို ညနေ ၆ နာရီရော။
☞ ဟောငျတဲ့ နာ့ယနျ့(ငျ)ဟဲငျးဟောငျ နီးရှနျ(ငျ)ခြှိနာrနဲ
☞ အငျး၊ အဲဒီလို ကောငျးတယျ၊ မငျး ဘယျသှားခငျြတာလဲ။
☞ ဇိုကျzဝူတာ့ကြဲတဲ့ ယိတာ့လိဆနျးထငျး(ငျ) ဇဲငျzမဲာ့ယနျ့(ငျ)
☞ ၅ လမျးက အီတလီစားသောကျဆိုငျဆို ဘယျလိုလဲ။
☞ အော့ ဝျေါပုရှီဟှမျး နာ့ကြားဆနျးထငျး(ငျ) ဝျေါပုရှနျ(ငျ) ခြှိနာ့r
☞ အိုး၊ ငါ အဲဒီစားသောကျဆိုငျကို မကွိုကျဘူး၊ ငါ အဲဒီကို မသှားခငျြဘူး။
☞ နာ့ အိုငျးကယျြhထားတဲ့ နာ့ကဲာ့ဟနျးကျောဆနျးထငျး(ငျ) ဇဲငျzမဲာ့ယနျ့(ငျ)
☞ ဒါဆိုရငျ အဲဒါနဲ့ကပျလကျြ ကိုရီးယား စားသောကျဆိုငျဆိုရငျ ဘယျလိုလဲ။
☞ ဟောငျတဲ့ ဝေါရှီဟှမျး နာ့ကဲာ့တိဖနျးf(ငျ)
☞ ကောငျးပွီလေ၊ ငါ အဲဒီနရောကို ကွိုကျပါတယျ။
စာသင်ခန်းမှာ - ၂ ။
12:34 AM C-Sentence , Chinese
စာသင်ခန်းထဲမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားပြောပုံစံ ဝါကျတိုလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Duō xiě le jǐ biàn jiù jì zhù le.
☞ တောရှယ်လဲာ့ကျီပြန့် ကျို့ကျိကျုhလဲာ့
☞ အခေါက်ရေ များများရေးရင် မှတ်မိသွားလိမ့်မယ်။
☞ Zhè yǒu shénme, yìdiǎn yě bù nán!
☞ ကျဲ့hယိုရှဲhမဲာ့ ယိတျန်းယယ် ပုနန်
☞ ဒါလေးများကွာ၊ ဘာခက်တာမှတ်လို့။
☞ Nǐ xué le yì nián Hànyǔ jiù jiǎng de zhème hǎo.
☞ နီရွှယ်လဲာ့ယိနျန်ဟန့်ယွီ ကျို့ကျန်(င်)တဲ့ ကျဲ့hမဲာ့ဟောင်
☞ မင်း တရုတ်စာ တစ်နှစ်သင်လိုက်တာ ဒီလောက်တောင် ပြောနိုင်တယ်။
☞ Bǐ nǐ qǐ lái, wǒ hái chà de yuǎn ne.
☞ ပီးနီချီလိုင် ဝေါ်ဟိုင်ချာ့hတဲ့ယွမ်နဲ
☞ မင်းနဲ့စာရင် ငါက ညံ့ပါသေးတယ်။
☞ Xué wàiyǔ de huà, bù gāi hàixiū.
☞ ရွှယ်ဝိုက်ယွီတဲ့ဟွာ့ ပုကိုင်းဟိုက်ရှိုး
☞ နိုင်ငံခြားဘာသာစကား လေ့လာတဲ့အခါ မရှက်သင့်ဘူး။
☞ Shuō cuò le wǒ pà biérén xiào huà.
☞ ရှောhဆော့လဲာ့ ဝေါ်ဖာ့ ပြယ်ရဲင်rရှောက်ဟွာ့
☞ အပြောမှားသွားရင် သူများဟားခံရမှာ စိုးလို့ပါ။
☞ Nǐ néng zuò fānyì le ma?
☞ နီနဲင်(င်)ဇော့z ဖန်းfယိလဲာ့မား
☞ မင်း စကားပြန် လုပ်နိုင်ပြီလား။
☞ Wǒ nǎ yǒu nàme gāo de shuǐpíng a.
☞ ဝေါ်နားယို နာ့မဲာ့ကောင်းတဲ့ရွှေhဖျင်(င်)အား
☞ ငါ့ Skill က ဘယ်ကလာ အဲဒီလောက် မြင့်ရမှာလဲ။
☞ Zhè ge yòng Hànyǔ zěnme shuō?
☞ ကျဲ့hကဲာ့ ယုံ့(င်)ဟန့်ယွီ ဇဲင်zမဲာ့ရှောh
☞ ဒါကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
☞ Nǐ tīng guo Wáng lǎoshī de kè ma?
☞ နီထင်း(င်)ကော့ ဝမ်း(င်)လောင်ရှီးhတဲ့ခဲါ့မား
☞ မင်း ဆရာ"ဝမ်"နဲ့ သင်ဖူးလား။
☞ Wǒ shì Wáng lǎoshī de xuéshēng.
☞ ဝေါ်ရှစ်h ဝမ်း(င်)လောင်ရှီးhတဲ့ ရွှယ်ရှဲင်းh(င်)
☞ ငါက ဆရာ"ဝမ်"ရဲ့ တပည့်ပါ။
☞ Nà wèi lǎoshī jiāo Hànyǔ yǔfǎ hěn zàiháng.
☞ နာ့ဝေ့လောင်ရှီးh ကျောင်းဟန့်ယွီယွီးဖာf ဟဲင်ဇိုက်zဟန်(င်)
☞ အဲဒီဆရာ တရုတ်သဒ္ဒါသင်တာ အရမ်း ကျွမ်းတယ်။
☞ Wǒ xǐhuan zài jiàoshì lǐ xuéxí.
☞ ဝေါရှီဟွမ်း ဇိုက်zကျောက်ရှစ်hလီ ရွှဲရှီ
☞ ငါက စာသင်ခန်းထဲမှာ သင်ယူရတာကို သဘောကျတယ်။
☞ Tā xuéxí hěn kèkǔ.
☞ ထားရွှဲရှီ ဟဲင်ခဲါ့ခူ
☞ သူမက အရမ်း ကြိုးစားလေ့လာတယ်။
☞ Wǒ yě xuéxí fēicháng qínfèn.
☞ ဝေါယယ်ရွှဲရှီ ဖေးfချန်းh(င်)ချင်ဖဲင့်f
☞ ကျွန်တော်လည်း အစွမ်းကုန် ကြိုးစားလေ့လာတယ်။
☞ Wǒ xué le hěn duō Hànyǔ yǔfǎ.
☞ ဝေါ်ရွှယ်လဲာ့ ဟဲင်တော ဟန့်ယွီယွီးဖာf
☞ ကျွန်တော် တရုတ်သဒ္ဒါတွေကို အများကြီး သင်ယူပြီးပြီ။
☞ Zhǐ yǒu xūxīn xuéxí, cái néng jìnbù.
☞ ကျီးhယိုရွှီးရှင်းရွှဲရှီ ဆိုင်းနဲင်(င်)ကျင့်ပု
☞ စိတ်ထားနှိမ့်ချသင်ယူမှ တိုးတက်နိုင်မယ်။
☞ Wǒmen xuǎnzé xuéxí Hànyǔ.
☞ ဝေါ်မဲင်းရွှမ်ဇဲယ်z ရွှဲရှီဟန့်ယွီ
☞ ငါတို့က တရုတ်စကားကို သင်ယူဖို့ ရွေးချယ်ထားကြတယ်။
စာသငျခနျးမှာ - ၂ ။
စာသငျခနျးထဲမှာ ပွောလရှေိ့တဲ့ စကားပွောပုံစံ ဝါကတြိုလေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ တောရှယျလဲာ့ကြီပွနျ့ ကြို့ကြိကြုhလဲာ့
☞ အခေါကျရေ မြားမြားရေးရငျ မှတျမိသှားလိမျ့မယျ။
☞ ကြဲ့hယိုရှဲhမဲာ့ ယိတနျြးယယျ ပုနနျ
☞ ဒါလေးမြားကှာ၊ ဘာခကျတာမှတျလို့။
☞ နီရှယျလဲာ့ယိနနျြဟနျ့ယှီ ကြို့ကနျြ(ငျ)တဲ့ ကြဲ့hမဲာ့ဟောငျ
☞ မငျး တရုတျစာ တဈနှဈသငျလိုကျတာ ဒီလောကျတောငျ ပွောနိုငျတယျ။
☞ ပီးနီခြီလိုငျ ဝျေါဟိုငျခြာ့hတဲ့ယှမျနဲ
☞ မငျးနဲ့စာရငျ ငါက ညံ့ပါသေးတယျ။
☞ ရှယျဝိုကျယှီတဲ့ဟှာ့ ပုကိုငျးဟိုကျရှိုး
☞ နိုငျငံခွားဘာသာစကား လလေ့ာတဲ့အခါ မရှကျသငျ့ဘူး။
☞ ရှောhဆော့လဲာ့ ဝျေါဖာ့ ပွယျရဲငျrရှောကျဟှာ့
☞ အပွောမှားသှားရငျ သူမြားဟားခံရမှာ စိုးလို့ပါ။
☞ နီနဲငျ(ငျ)ဇော့z ဖနျးfယိလဲာ့မား
☞ မငျး စကားပွနျ လုပျနိုငျပွီလား။
☞ ဝျေါနားယို နာ့မဲာ့ကောငျးတဲ့ရှေhဖငျြ(ငျ)အား
☞ ငါ့ Skill က ဘယျကလာ အဲဒီလောကျ မွငျ့ရမှာလဲ။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ ယုံ့(ငျ)ဟနျ့ယှီ ဇဲငျzမဲာ့ရှောh
☞ ဒါကို တရုတျလို ဘယျလိုပွောမလဲ။
☞ နီထငျး(ငျ)ကော့ ဝမျး(ငျ)လောငျရှီးhတဲ့ခဲါ့မား
☞ မငျး ဆရာ"ဝမျ"နဲ့ သငျဖူးလား။
☞ ဝျေါရှဈh ဝမျး(ငျ)လောငျရှီးhတဲ့ ရှယျရှဲငျးh(ငျ)
☞ ငါက ဆရာ"ဝမျ"ရဲ့ တပညျ့ပါ။
☞ နာ့ဝလေ့ောငျရှီးh ကြောငျးဟနျ့ယှီယှီးဖာf ဟဲငျဇိုကျzဟနျ(ငျ)
☞ အဲဒီဆရာ တရုတျသဒ်ဒါသငျတာ အရမျး ကြှမျးတယျ။
☞ ဝေါရှီဟှမျး ဇိုကျzကြောကျရှဈhလီ ရှဲရှီ
☞ ငါက စာသငျခနျးထဲမှာ သငျယူရတာကို သဘောကတြယျ။
☞ ထားရှဲရှီ ဟဲငျခဲါ့ခူ
☞ သူမက အရမျး ကွိုးစားလလေ့ာတယျ။
☞ ဝေါယယျရှဲရှီ ဖေးfခနျြးh(ငျ)ခငျြဖဲငျ့f
☞ ကြှနျတျောလညျး အစှမျးကုနျ ကွိုးစားလလေ့ာတယျ။
☞ ဝျေါရှယျလဲာ့ ဟဲငျတော ဟနျ့ယှီယှီးဖာf
☞ ကြှနျတျော တရုတျသဒ်ဒါတှကေို အမြားကွီး သငျယူပွီးပွီ။
☞ ကြီးhယိုရှီးရှငျးရှဲရှီ ဆိုငျးနဲငျ(ငျ)ကငျြ့ပု
☞ စိတျထားနှိမျ့ခသြငျယူမှ တိုးတကျနိုငျမယျ။
☞ ဝျေါမဲငျးရှမျဇဲယျz ရှဲရှီဟနျ့ယှီ
☞ ငါတို့က တရုတျစကားကို သငျယူဖို့ ရှေးခယျြထားကွတယျ။
စာသင်ခန်းမှာ - ၁ ။
12:20 AM C-Sentence , Chinese
စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာနဲ့ကျောင်းသားတွေ အပြန်အလှန် ပြောလေ့ရှိတဲ့ ဝါကျတိုလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
☞ Lǎoshī hǎo!
☞ လောင်ရှီးh ဟောင်
☞ ဆရာ၊ မင်္ဂလာပါ။
☞ Tóngxuémen hǎo!
☞ ထုံး(င်)ရွှယ်မဲင်း ဟောင်
☞ ကျောင်းသားတွေ၊ မင်္ဂလာပါ။
☞ Dàjiā dōu yùxí le ma?
☞ တာ့ကျားတိုး ယွိရှီလဲာ့မား
☞ အားလုံး ကြိုတင်လေ့လာထားကြပြီးပြီလား။
☞ Qǐng nǐmen héshàng shū.
☞ ချင်း(င်)နီမဲင် ဟဲယ်ရှန့်h(င်)ရှူးh
☞ စာအုပ်တွေကို ပိတ်လိုက်ကြပါ။
☞ Qǐng zhùyì tīng.
☞ ချင်(င်) ကျုhယိထင်း(င်)
☞ ဂရုစိုက်ပြီး နားထောင်ကြပါ။
☞ Dàshēng niàn.
☞ တာ့ရှဲင်းh(င်) နျန့်
☞ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ဖတ်ကြပါ။
☞ Qǐng dàjiā fān dào xià yí yè.
☞ ချင်(င်) တာ့ကျားဖန်းfတောက် ရှာ့ယီယဲ့
☞ နောက်တစ်မျက်နှာကို လှန်လိုက်ပါ။
☞ Lǎoshī yǐjīng bǎ báibǎn shàng de zì cā le.
☞ လောင်ရှီးhယီကျင်း(င်) ပါပိုင်းပန်ရှန့်h(င်)တဲ့ဇစ်z ဆားလဲာ့
☞ ဆရာက ဝှိုက်ဘုတ်ပေါ်က စာလုံးကို ဖျက်လိုက်ပြီ။
☞ Xiě zài yòu xià fāng.
☞ ရှယ်ဇိုက်z ယို့ရှာ့ဖန်းf(င်)
☞ ညာဘက်ဒေါင့် အောက်ခြေမှာ ရေးပါ။
☞ Xiě de tài liáocǎo le.
☞ ရှယ်တဲ့ ထိုက် လျောင်းဆောင်လဲာ့
☞ လက်ရေးက သိပ်သော့နေတယ်။
☞ Zhōngwǔ yìdiǎn yǐqián jiù xiě wán le.
☞ ကျုံးh(င်)ဝူယိတျန်းယီချန် ကျို့ရှယ်ဝမ်လဲာ့
☞ နေ့လည် တစ်နာရီမထိုးခင်ကတည်းက ရေးပြီးပြီ။
☞ Lǎoshī gǎi zuòyè ne.
☞ လောင်ရှီးh ကိုင်ဇော့zယဲ့နဲ
☞ ဆရာက အိမ်စာတွေ အမှတ်ခြစ်နေတယ်။
☞ Wǒ de nín gǎi le ma?
☞ ဝေါ်တဲ့ နင်းကိုင်လဲာ့မား
☞ ကျွန်တော့်ဟာ အမှတ်ခြစ်ပြီးပြီလား။
☞ Cuòwù duō bù duō?
☞ ဆော့ဝု တောပုတော
☞ Wǒ lǎoshì xiěcuò zhè ge zì.
☞ ဝေါ လောင်ရှစ်hရှယ်ဆော့ ကျဲ့hကဲာ့ဇစ်z
☞ ကျွန်တော် ဒီစာလုံးကို အမြဲ အရေးမှားလေ့ရှိတယ်။
☞ Bù dǒng zěnme yě bú wèn ne?
☞ ပုတုံ(င်) ဇဲင်zမဲာ့ယယ် ပူဝဲင့်နဲ
☞ နားမလည်တာကို ဘာလို့ မမေးတာလဲ။
☞ Zuótiān de kè wǒ méi shàng chéng.
☞ ဇော်zထျန်းတဲ့ခဲါ့ ဝေါ်မေရှန့်h(င်)ချဲင်h(င်)
☞ မနေ့ကအတန်းကို ကျွန်တော် မတက်ဖြစ်လိုက်ဘူး။
☞ Hànzì hěn nán rèn.
☞ ဟန့်ဇစ်z ဟဲင်နန်ရဲင့်r
☞ တရုတ်စာလုံးတွေက မှတ်ရခက်တယ်။
စာသငျခနျးမှာ - ၁ ။
စာသငျခနျးထဲမှာ ဆရာနဲ့ကြောငျးသားတှေ အပွနျအလှနျ ပွောလရှေိ့တဲ့ ဝါကတြိုလေးတှကေို စုစညျးဖျောပွလိုကျပါတယျ။
☞ လောငျရှီးh ဟောငျ
☞ ဆရာ၊ မင်ျဂလာပါ။
☞ ထုံး(ငျ)ရှယျမဲငျး ဟောငျ
☞ ကြောငျးသားတှေ၊ မင်ျဂလာပါ။
☞ တာ့ကြားတိုး ယှိရှီလဲာ့မား
☞ အားလုံး ကွိုတငျလလေ့ာထားကွပွီးပွီလား။
☞ ခငျြး(ငျ)နီမဲငျ ဟဲယျရှနျ့h(ငျ)ရှူးh
☞ စာအုပျတှကေို ပိတျလိုကျကွပါ။
☞ ခငျြ(ငျ) ကြုhယိထငျး(ငျ)
☞ ဂရုစိုကျပွီး နားထောငျကွပါ။
☞ တာ့ရှဲငျးh(ငျ) နနျြ့
☞ အသံကယျြကယျြနဲ့ ဖတျကွပါ။
☞ ခငျြ(ငျ) တာ့ကြားဖနျးfတောကျ ရှာ့ယီယဲ့
☞ နောကျတဈမကျြနှာကို လှနျလိုကျပါ။
☞ လောငျရှီးhယီကငျြး(ငျ) ပါပိုငျးပနျရှနျ့h(ငျ)တဲ့ဇဈz ဆားလဲာ့
☞ ဆရာက ဝှိုကျဘုတျပျေါက စာလုံးကို ဖကျြလိုကျပွီ။
☞ ရှယျဇိုကျz ယို့ရှာ့ဖနျးf(ငျ)
☞ ညာဘကျဒေါငျ့ အောကျခွမှော ရေးပါ။
☞ ရှယျတဲ့ ထိုကျ လြောငျးဆောငျလဲာ့
☞ လကျရေးက သိပျသော့နတေယျ။
☞ ကြုံးh(ငျ)ဝူယိတနျြးယီခနျြ ကြို့ရှယျဝမျလဲာ့
☞ နလေ့ညျ တဈနာရီမထိုးခငျကတညျးက ရေးပွီးပွီ။
☞ လောငျရှီးh ကိုငျဇော့zယဲ့နဲ
☞ ဆရာက အိမျစာတှေ အမှတျခွဈနတေယျ။
☞ ဝျေါတဲ့ နငျးကိုငျလဲာ့မား
☞ ကြှနျတေျာ့ဟာ အမှတျခွဈပွီးပွီလား။
☞ ဆော့ဝု တောပုတော
☞ ဝေါ လောငျရှဈhရှယျဆော့ ကြဲ့hကဲာ့ဇဈz
☞ ကြှနျတျော ဒီစာလုံးကို အမွဲ အရေးမှားလရှေိ့တယျ။
☞ ပုတုံ(ငျ) ဇဲငျzမဲာ့ယယျ ပူဝဲငျ့နဲ
☞ နားမလညျတာကို ဘာလို့ မမေးတာလဲ။
☞ ဇျောzထနျြးတဲ့ခဲါ့ ဝျေါမရှေနျ့h(ငျ)ခြဲငျh(ငျ)
☞ မနကေ့အတနျးကို ကြှနျတျော မတကျဖွဈလိုကျဘူး။
☞ ဟနျ့ဇဈz ဟဲငျနနျရဲငျ့r
☞ တရုတျစာလုံးတှကေ မှတျရခကျတယျ။
12:12 AM C-Sentence , Chinese
မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ အလှူဒါနပြုရတာကို ကုသိုလ်တစ်မျိုးအဖြစ် ခံယူထားကြပါတယ်။ အလှူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားပြောဝါကျတိုလေးတွေကို လေ့လာကြရအောင်။
☞ Míngtiān wǒ jiā jǔxíng bùshīhuì.
☞ မျင်(င်)ထျန်း ဝေါ်ကျားကျွီရှင်(င်) ပုရှီးhဟွေ့
☞ မနက်ဖြန် ငါ့အိမ်မှာ အလှူပွဲကျင်းပမယ်။
☞ Qǐng nǐmen quán jiā dōu lái cānjiā ba.
☞ ချင်(င်) နီမဲင်ချွမ်ကျားတိုး လိုင်ဆန်းကျားပါ့
☞ မင်းတို့ တစ်အိမ်သားလုံး ကြွခဲ့ကြပါ။
☞ Bùshīhuì yǐ shénme zhāodài.
☞ ပုရှီးhဟွေ့ ယီရှဲhမဲာ့ ကျောင်းhတိုက်
☞ အလှူပွဲက ဘာနဲ့ဧည့်ခံမှာလဲ။
☞ Dǎsuàn yǐ jīyóufàn zhāodài.
☞ တာစွမ့် ယီကျီးယိုဖန့်f ကျောင်းhတိုက်
☞ ကြက်ဆီထမင်းနဲ့ ဧည့်ခံမယ် စိတ်ကူးထားတယ်။
☞ Qǐng héshàng niàn xiāozāijīng ma?
☞ ချင်(င်)ဟဲယ်ရှန်h(င်) နျန့်ရှောင်းဇိုင်းzကျင်း(င်)မား
☞ ဘုန်းကြီးပင့်ပြီး ပရိတ်ရွတ်မှာလား။
☞ Qǐng wǔ wèi héshàng yòng zhāifàn.
☞ ချင်(င်)ဝူဝေ့ဟဲယ်ရှန့်h(င်) ယုံ့(င်)ကျိုင်းhဖန့်f
☞ ဘုန်းကြီးငါးပါးပင့်ပြီး ဆွမ်းကပ်မယ်။
☞ Wǒ yào duǎnqī chūjiā zuò héshàng.
☞ ဝေါ်ယောက် တွမ်ချီးချူးhကျား ဇော့zဟဲယ်ရှန့်h(င်)
☞ ငါ ဒုလ္လဘ ဝတ်မလို့ပါ။
☞ Wǒ jiā jǔxíng fèngxiàn sēngyī yìshì.
☞ ဝေါ်ကျားကျွီရှင်(င်) ဖဲင့်f(င်)ရှန့်စဲင်း(င်)ယီး ယိရှစ်h
☞ ငါ့အိမ်မှာ ကထိန်ခင်းမယ်။
☞ Hòutiān tā jiā jǔbàn bài jiǔ fó de yìshì.
☞ ဟို့ထျန်း ထားကျားကျွီပန့် ပိုက်ကျိုဖော်fတဲ့ ယိရှစ်h
☞ သန်ဘက်ခါ သူ့အိမ်မှာ ဘုရားကိုးဆူကပ်ပွဲ ကျင်းပမယ်။
☞ Nǐ yídìng yào lái cānjiā ba.
☞ နီ ယီတင့်(င်)ယောက်လိုင် ဆန်းကျားပါ့
☞ မင်း ဆက်ဆက်လာရမယ်နော်။
☞ Bùshīhuì zǎoshang qī diǎn kāishǐ.
☞ ပုရှီးhဟွေ့ ဇောင်zရှန့်h(င်)ချီးတျန် ခိုင်းရှီh
☞ အလှူပွဲက မနက်ခုနစ်နာရီ စမယ်။
☞ Nǐ fàngxīn ba.
☞ မင်း စိတ်ချပါ။
☞ Yíqiè bùshī zhōng, fǎ bùshī wéi zuì.
☞ ယီချဲ့ပုရှီးhကျုံးh(င်) ဖာfပုရှီးh ဝေဇွေ့z
☞ အလှူတကာ့အလှူတွင် ဓမ္မအလှူသည် အမြတ်ဆုံး။
☞ Búlùn duōshǎo, qǐng dàjiā juān kuǎn.
☞ ပူလွင့်တောရှောင်h ချင်(င်)တာ့ကျား ကျွမ်းခွမ်
☞ အလှူငွေကို နည်းများမဆို ထည့်ဝင်လှူဒါန်းကြပါ။
☞ Zhè ge bùshīhuì bù shōu fènziqián.
☞ ကျဲ့hကဲာ့ပုရှီးhဟွေ့ ပုရှိုးh ဖဲင့်fဇစ်zချန်
☞ ဒီအလှူပွဲက ငွေကူ လက်မခံဘူး။
☞ Wǒ xiǎng gěi héshàng jìngxiàn júzishuǐ.
☞ ဝေါရှန်း(င်)ကေ ဟဲယ်ရှန့်h(င်) ကျင့်(င်)ရှန့် ကျွီးဇစ်zရွှေh
☞ ငါက ဘုန်းကြီးတွေကို လိမ္မော်ရည်ကပ်ချင်တယ်။
☞ Tā shì ge kāngkǎi bùshīzhě.
☞ ထားရှစ်hကဲာ့ ခန်း(င်)ခိုင် ပုရှီးhကျယ်h
☞ သူက အလှူဒါနပြုတာ အရမ်း ရက်ရောတယ်။
☞ Ãyí dǎsuàn jǔxíng shèngdà bùshī.
☞ အားယီ တာစွမ့်ကျွီရှင်(င်) ရှဲင့်h(င်)တာ့ပုရှီးh
☞ အဒေါ်က အလှူကြီးပေးဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်။
မွနျမာလူမြိုး ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှဟော အလှူဒါနပွုရတာကို ကုသိုလျတဈမြိုးအဖွဈ ခံယူထားကွပါတယျ။ အလှူနဲ့ ပတျသကျတဲ့ စကားပွောဝါကတြိုလေးတှကေို လလေ့ာကွရအောငျ။
☞ မငျြ(ငျ)ထနျြး ဝျေါကြားကြှီရှငျ(ငျ) ပုရှီးhဟှေ့
☞ မနကျဖွနျ ငါ့အိမျမှာ အလှူပှဲကငျြးပမယျ။
☞ ခငျြ(ငျ) နီမဲငျခြှမျကြားတိုး လိုငျဆနျးကြားပါ့
☞ မငျးတို့ တဈအိမျသားလုံး ကွှခဲ့ကွပါ။
☞ ပုရှီးhဟှေ့ ယီရှဲhမဲာ့ ကြောငျးhတိုကျ
☞ အလှူပှဲက ဘာနဲ့ဧညျ့ခံမှာလဲ။
☞ တာစှမျ့ ယီကြီးယိုဖနျ့f ကြောငျးhတိုကျ
☞ ကွကျဆီထမငျးနဲ့ ဧညျ့ခံမယျ စိတျကူးထားတယျ။
☞ ခငျြ(ငျ)ဟဲယျရှနျh(ငျ) နနျြ့ရှောငျးဇိုငျးzကငျြး(ငျ)မား
☞ ဘုနျးကွီးပငျ့ပွီး ပရိတျရှတျမှာလား။
☞ ခငျြ(ငျ)ဝူဝဟေဲ့ယျရှနျ့h(ငျ) ယုံ့(ငျ)ကြိုငျးhဖနျ့f
☞ ဘုနျးကွီးငါးပါးပငျ့ပွီး ဆှမျးကပျမယျ။
☞ ဝျေါယောကျ တှမျခြီးခြူးhကြား ဇော့zဟဲယျရှနျ့h(ငျ)
☞ ငါ ဒုလ်လဘ ဝတျမလို့ပါ။
☞ ဝျေါကြားကြှီရှငျ(ငျ) ဖဲငျ့f(ငျ)ရှနျ့စဲငျး(ငျ)ယီး ယိရှဈh
☞ ငါ့အိမျမှာ ကထိနျခငျးမယျ။
☞ ဟို့ထနျြး ထားကြားကြှီပနျ့ ပိုကျကြိုဖျောfတဲ့ ယိရှဈh
☞ သနျဘကျခါ သူ့အိမျမှာ ဘုရားကိုးဆူကပျပှဲ ကငျြးပမယျ။
☞ နီ ယီတငျ့(ငျ)ယောကျလိုငျ ဆနျးကြားပါ့
☞ မငျး ဆကျဆကျလာရမယျနျော။
☞ ပုရှီးhဟှေ့ ဇောငျzရှနျ့h(ငျ)ခြီးတနျြ ခိုငျးရှီh
☞ အလှူပှဲက မနကျခုနဈနာရီ စမယျ။
☞ မငျး စိတျခပြါ။
☞ ယီခြဲ့ပုရှီးhကြုံးh(ငျ) ဖာfပုရှီးh ဝဇှေေ့z
☞ အလှူတကာ့အလှူတှငျ ဓမ်မအလှူသညျ အမွတျဆုံး။
☞ ပူလှငျ့တောရှောငျh ခငျြ(ငျ)တာ့ကြား ကြှမျးခှမျ
☞ အလှူငှကေို နညျးမြားမဆို ထညျ့ဝငျလှူဒါနျးကွပါ။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ပုရှီးhဟှေ့ ပုရှိုးh ဖဲငျ့fဇဈzခနျြ
☞ ဒီအလှူပှဲက ငှကေူ လကျမခံဘူး။
☞ ဝေါရှနျး(ငျ)ကေ ဟဲယျရှနျ့h(ငျ) ကငျြ့(ငျ)ရှနျ့ ကြှီးဇဈzရှေh
☞ ငါက ဘုနျးကွီးတှကေို လိမ်မျောရညျကပျခငျြတယျ။
☞ ထားရှဈhကဲာ့ ခနျး(ငျ)ခိုငျ ပုရှီးhကယျြh
☞ သူက အလှူဒါနပွုတာ အရမျး ရကျရောတယျ။
☞ အားယီ တာစှမျ့ကြှီရှငျ(ငျ) ရှဲငျ့h(ငျ)တာ့ပုရှီးh
☞ အဒျေါက အလှူကွီးပေးဖို့ စိတျကူးထားတယျ။
10:09 PM C-Sentence , Chinese
နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ မိမိ ဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်တယ်၊ မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုတာကို ဖော်ပြတတ်အောင် ဒါလေးတွေကို လေ့လာထားပါ။
☞ Tā lüèwēi dǒng yìdiǎn Hànyǔ.
☞ ထားလျွဲ့ဝေး တုံ(င်)ယိတျန် ဟန့်ယွီ
☞ သူ တရုတ်စကားကို မတောက်တခေါက် နားလည်တယ်။
☞ Nǐ Zhōngguóhuà jiǎng de liúlì ma?
☞ နီ ကျုံးh(င်)ကော်ဟွာ့ ကျန်(င်)တဲ့လျိုယိမား
☞ မင်း တရုတ်စကား လည်လည်ပတ်ပတ် ပြောတတ်လား။
☞ Jīngtōng Guǎngdōnghuà.
☞ ကျင်း(င်)ထုံး(င်) ကွမ်(င်)တုံး(င်)ဟွာ့
☞ ဟောင်ကောင်စကား ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်တယ်။
☞ Tā bù néng shǔliàn de jiǎng Yīngyǔ.
☞ ထားပုနဲင်(င်) ရှူhလျန့်တဲ့ ကျန်(င်)ယင်း(င်)ယွီ
☞ သူ အင်္ဂလိပ်စကား လည်လည်ဝယ်ဝယ် မပြောနိုင်ဘူး။
☞ Zhǐ huì jiǎng yìdiǎn Fǎyǔ rìcháng shēnghuó yòngyǔ.
☞ ကျီhဟွေ့ကျန်(င်)ယိတျန်ဖားfယွီ ရွတ်rချန်h(င်)ရှဲင်းh(င်)ဟော် ယုံ့(င်)ယွီ
☞ ပြင်သစ်လို ထမင်းစားရေသောက်လောက်ပဲ ပြောတတ်တယ်။
☞ Nǐmen guójiā de guānfāng yǔyán shì shénme?
☞ နီမဲင်းကော်ကျားတဲ့ ကွမ်း(င်)ဖန်းf(င်)ယွီယန် ရှစ်hရှဲhမဲာ့
☞ မင်းတို့နိုင်ငံရဲ့ ရုံးသုံးဘာသာစကားက ဘာလဲ။
☞ Tā néng shūxiě hé yuèdú yìbān de Yīngwén.
☞ ထားနဲင်(င်)ရှူးhရှယ်ဟဲယ် ယွဲ့တူ ယိပန်းတဲ့ ယင်း(င်)ဝဲင်
☞ အင်္ဂလိပ်စာကို သူ တော်တော်တန်တန် ရေးနိုင်ဖတ်နိုင်တယ်။
☞ Qǐng nǐ jiǎng Miǎnyǔ ba.
☞ ချင်း(င်)နီကျန်(င်) မြန်းယွီပါ့
☞ မြန်မာလို ပြောပါ။
☞ Néng liúlì de shuō Tàiyǔ.
☞ နဲင်း(င်)လျိုလိတဲ့ ရှောhထိုက်ယွီ
☞ ထိုင်းစကားကို ရေရေလည်လည် ပြောနိုင်တယ်။
☞ Tā Yīngyǔ jiǎng de hěn chúnzhèng.
☞ ထား ယင်း(င်)ယွီးကျန်(င်)တဲ့ ဟဲင်ချွင်hကျဲင့်h(င်)
☞ သူ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ သိပ်ပီတာပဲ။
☞ Nǐ huì shuō jǐ zhǒng yǔyán?
☞ နီဟွေ့ရှောh ကျီးကျုံh(င်)ယွီယန်
☞ ခင်ဗျား ဘာသာစကား ဘယ်နှစ်မျိုးပြောတတ်လဲ။
☞ Tā jiǎng Yīngyǔ dài yǒu Zhōngguó kǒuyīn.
☞ ထားကျန်(င်)ယင်း(င်)ယွီ တိုက်ယို ကျုံးh(င်)ကောခိုယင်း
☞ သူ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာ တရုတ်သံဝဲတယ်။
☞ Tā jiǎng Miǎnyǔ chúnzhèng liúlì.
☞ ထားကျန်(င်)မြန်းယွီ ချွင်hကျဲင့်h(င်)လျိုယိ
☞ သူ မြန်မာစကားကို ပီပီသသ ရေရေလည်လည် ပြောတတ်တယ်။
☞ Tā bù dǒng wǒ de huà, zhǐhǎo dǎ shǒushì.
☞ ထားပုတုံ(င်) ဝေါ်တဲ့ဟွာ့ ကျီးhဟောင် တားရှိုhရှစ်h
☞ ကိုယ့်စကား သူနားမလည်တော့ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ပဲ ပြောရတယ်။
☞ Tā jǐnjǐn néng yìbān de yuèdú.
☞ ထားကျင်းကျင်နဲင်(င်) ယိပန်းတဲ့ယွဲ့တူ
☞ သူက သေစာရှင်စာ ဖတ်တတ်ရုံပါပဲ။
☞ Yīnwèi yǒu Zhōngwén dǐzi xué Rìyǔ jiù róngyì le.
☞ ယင်းဝေ့ယို ကျုံးh(င်)ဝဲင်းတီဇစ်z ရွှယ်ရွတ်ယွီ ကျို့ရုံr(င်)ယိလဲာ့
☞ တရုတ်စာအခံရှိတော့ ဂျပန်စာသင်ရလွယ်တာပေါ့။
☞ Hànyǔ nán xué ma?
☞ ဟန့်ယွီ နန်းရွှယ်မား
☞ တရုတ်စကားက သင်ရခက်လား။
☞ Rènzhēn xué jiù bù nán.
☞ ရဲင့်rကျဲင်းhရွှယ် ကျို့ပုနန်
☞ သေသေချာချာ သင်ယူရင် မခက်ပါဘူး။
နိုငျငံခွားဘာသာစကားတဈခုခုကို လလေ့ာတဲ့အခါမှာ မိမိ ဘယျလောကျကြှမျးကငျြတယျ၊ မကြှမျးကငျြဘူးဆိုတာကို ဖျောပွတတျအောငျ ဒါလေးတှကေို လလေ့ာထားပါ။
☞ ထားလြှဲ့ဝေး တုံ(ငျ)ယိတနျြ ဟနျ့ယှီ
☞ သူ တရုတျစကားကို မတောကျတခေါကျ နားလညျတယျ။
☞ နီ ကြုံးh(ငျ)ကျောဟှာ့ ကနျြ(ငျ)တဲ့လြိုယိမား
☞ မငျး တရုတျစကား လညျလညျပတျပတျ ပွောတတျလား။
☞ ကငျြး(ငျ)ထုံး(ငျ) ကှမျ(ငျ)တုံး(ငျ)ဟှာ့
☞ ဟောငျကောငျစကား ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ ပွောတတျတယျ။
☞ ထားပုနဲငျ(ငျ) ရှူhလနျြ့တဲ့ ကနျြ(ငျ)ယငျး(ငျ)ယှီ
☞ သူ အင်ျဂလိပျစကား လညျလညျဝယျဝယျ မပွောနိုငျဘူး။
☞ ကြီhဟှကေ့နျြ(ငျ)ယိတနျြဖားfယှီ ရှတျrခနျြh(ငျ)ရှဲငျးh(ငျ)ဟျော ယုံ့(ငျ)ယှီ
☞ ပွငျသဈလို ထမငျးစားရသေောကျလောကျပဲ ပွောတတျတယျ။
☞ နီမဲငျးကျောကြားတဲ့ ကှမျး(ငျ)ဖနျးf(ငျ)ယှီယနျ ရှဈhရှဲhမဲာ့
☞ မငျးတို့နိုငျငံရဲ့ ရုံးသုံးဘာသာစကားက ဘာလဲ။
☞ ထားနဲငျ(ငျ)ရှူးhရှယျဟဲယျ ယှဲ့တူ ယိပနျးတဲ့ ယငျး(ငျ)ဝဲငျ
☞ အင်ျဂလိပျစာကို သူ တျောတျောတနျတနျ ရေးနိုငျဖတျနိုငျတယျ။
☞ ခငျြး(ငျ)နီကနျြ(ငျ) မွနျးယှီပါ့
☞ မွနျမာလို ပွောပါ။
☞ နဲငျး(ငျ)လြိုလိတဲ့ ရှောhထိုကျယှီ
☞ ထိုငျးစကားကို ရရေလေညျလညျ ပွောနိုငျတယျ။
☞ ထား ယငျး(ငျ)ယှီးကနျြ(ငျ)တဲ့ ဟဲငျခြှငျhကြဲငျ့h(ငျ)
☞ သူ အင်ျဂလိပျလိုပွောတာ သိပျပီတာပဲ။
☞ နီဟှရှေ့ောh ကြီးကြုံh(ငျ)ယှီယနျ
☞ ခငျဗြား ဘာသာစကား ဘယျနှဈမြိုးပွောတတျလဲ။
☞ ထားကနျြ(ငျ)ယငျး(ငျ)ယှီ တိုကျယို ကြုံးh(ငျ)ကောခိုယငျး
☞ သူ အင်ျဂလိပျစကားပွောတာ တရုတျသံဝဲတယျ။
☞ ထားကနျြ(ငျ)မွနျးယှီ ခြှငျhကြဲငျ့h(ငျ)လြိုယိ
☞ သူ မွနျမာစကားကို ပီပီသသ ရရေလေညျလညျ ပွောတတျတယျ။
☞ ထားပုတုံ(ငျ) ဝျေါတဲ့ဟှာ့ ကြီးhဟောငျ တားရှိုhရှဈh
☞ ကိုယျ့စကား သူနားမလညျတော့ လကျဟနျခွဟေနျနဲ့ပဲ ပွောရတယျ။
☞ ထားကငျြးကငျြနဲငျ(ငျ) ယိပနျးတဲ့ယှဲ့တူ
☞ သူက သစောရှငျစာ ဖတျတတျရုံပါပဲ။
☞ ယငျးဝယေို့ ကြုံးh(ငျ)ဝဲငျးတီဇဈz ရှယျရှတျယှီ ကြို့ရုံr(ငျ)ယိလဲာ့
☞ တရုတျစာအခံရှိတော့ ဂပြနျစာသငျရလှယျတာပေါ့။
☞ ဟနျ့ယှီ နနျးရှယျမား
☞ တရုတျစကားက သငျရခကျလား။
☞ ရဲငျ့rကြဲငျးhရှယျ ကြို့ပုနနျ
☞ သသေခြောခြာ သငျယူရငျ မခကျပါဘူး။
အလုပ်အကြောင်း - ၂ ။
10:05 PM C-Sentence , Chinese
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ လက်တွေ့သုံးစကားပြော ဝါကျတိုလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Nǐ shénme shíhou qù zhǎo gōngzuò?
☞ နီ ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ ချွိကျောင်hကုံး(င်)ဇော့z
☞ မင်း ဘယ်တော့ အလုပ်သွားလျှောက်မှာလဲ။
☞ Míngtiān yào qù tíchū shēnqǐngshū.
☞ မျင်(င်)ထျန်းယောက်ချွိ ထီချူးh ရှဲင်းhချင်(င်)ရှူးh
☞ မနက်ဖြန် လျှောက်လွှာသွားတင်မယ်။
☞ Gàn yìtiān zhēng duōshǎo qián?
☞ ကန့်ယိထျန်း ကျဲင်းh(င်)တောရှောင်hချန်
☞ နေ့တွက် ဘယ်လောက်ရလဲ။
☞ Huì dédào shìdàng de gōngqián.
☞ ဟွေ့တဲယ်တောက် ရှစ်hတန့်(င်)တဲ့ ကုံး(င်)ချန်
☞ လုပ်ခ အထိုက်အလျောက်တော့ ရပါလိမ့်မယ်။
☞ Huòdé yìtiān de bàochou jiù xíng le.
☞ ဟော့တဲယ် ယိထျန်းတဲ့ပေါက်ချို ကျို့ရှင်(င်)လဲာ့
☞ နေ့တွက်ရရင် ပြီးရောပေါ့။
☞ Jiào tā dāngrèn ménwèi ba.
☞ ကျောက်ထားတန်း(င်)ရဲင့်r မဲင်ဝေ့ပါ့
☞ သူ့ကို ဂိတ်စောင့်အလုပ် ပေးလိုက်ပါ။
☞ Rènmìng le tā wéi jīnglǐ.
☞ ရဲင့်rမျင့်(င်)လဲာ့ထား ဝေကျင်း(င်)လီ
☞ သူ့ကို မန်နေဂျာခန့်လိုက်ပြီ။
☞ Tíchū bàogào le méiyǒu?
☞ ထီချူးh ပေါက်ကောက်လဲာ့မေးယို
☞ အစီရင်ခံစာ တင်ပြီးပြီလား။
☞ Tāmen shénme shíhou tíchū cíchéng?
☞ ထားမဲင် ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ ထီချူးhဆေးချဲင်h(င်)
☞ သူတို့ ဘယ်တုန်းက ထွက်စာတင်တာလဲ။
☞ Wǒ xiǎng qǐng bàntiān jià.
☞ ဝေါရှန်း(င်)ချင်(င်) ပန့်ထျန်းကျာ့
☞ ငါ နေ့တဝက် ခွင့်ယူချင်တယ်။
☞ Gōngzī zhào fā, xiūjià yí ge yuè.
☞ ကုံး(င်)ဇီးzကျောက်hဖားf ရှိုးကျာ့ ယီကဲာ့ယွဲ့
☞ လစာမပျက် ခွင့်တစ်လပေးတယ်။
☞ Nǐ lǐngqǔ gōngzī le ma?
☞ နီလင်း(င်)ချွီ ကုံး(င်)ဇီးzလဲာ့မား
☞ မင်း လခထုတ်ပြီးပြီလား။
☞ Cóng yuèxīn zhōng kòuchú, xíng bù xíng?
☞ ဆုံ(င်)ယွဲ့ရှင်းကျုံးh(င်) ခို့ချူh ရှင်(င်)ပုရှင်(င်)
☞ လခထဲက နှိမ်လိုက်မယ်၊ ဖြစ်မလား။
☞ Cóng xīnshuǐ zhōng kòu le wǔshí kuài měijīn.
☞ ဆုံ(င်)ရှင်းရွှေhကျုံးh(င်) ခို့လဲာ့ ဝူရှီhခွိုက်မေကျင်း
☞ လခထဲကနေ US$ 50 ဖြတ်လိုက်တယ်။
☞ Zěnme kòu shíwǔ tiān de chīfèi?
☞ ဇဲင်zမဲာ့ခို့ ဝူရှီhထျန်းတဲ့ ချီးhဖေ့f
☞ ဘာကြောင့် ၁၅ ရက်စာ ထမင်းစရိတ် ဖြတ်လိုက်တာလဲ။
☞ Tīngshuō gōngrén yāoqiú zēngjiā gōngzī?
☞ ထင်း(င်)ရှောh ကုံး(င်)ရဲင်rယောင်းချို ဇဲင်းz(င်)ကျားကုံး(င်)ဇီးz
☞ အလုပ်သမားတွေက လစာတိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုနေကြတယ်ဆို။
☞ Shìdàng tígāo le gōngzī.
☞ ရှစ်hတန့်(င်) ထီကောင်းလဲာ့ ကုံး(င်)ဇီးz
☞ လစာကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် တိုးမြှင့်ပေးပြီးပါပြီ။
☞ Suī shì jīnglǐ, dàn zá qī zá bā dōu gàn.
☞ စွေးရှစ်h ကျင်း(င်)လီ တန့် ဇာzချီးဇာzပါးတိုးကန့်
☞ မန်နေဂျာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း၊ အောက်ခြေသိမ်း အကုန်လုပ်တယ်။
အလုပျအကွောငျး - ၂ ။
လုပျငနျးခှငျထဲမှာ သုံးလရှေိ့တဲ့ လကျတှသေုံ့းစကားပွော ဝါကတြိုလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ နီ ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ ခြှိကြောငျhကုံး(ငျ)ဇော့z
☞ မငျး ဘယျတော့ အလုပျသှားလြှောကျမှာလဲ။
☞ မငျြ(ငျ)ထနျြးယောကျခြှိ ထီခြူးh ရှဲငျးhခငျြ(ငျ)ရှူးh
☞ မနကျဖွနျ လြှောကျလှာသှားတငျမယျ။
☞ ကနျ့ယိထနျြး ကြဲငျးh(ငျ)တောရှောငျhခနျြ
☞ နတှေ့ကျ ဘယျလောကျရလဲ။
☞ ဟှတေဲ့ယျတောကျ ရှဈhတနျ့(ငျ)တဲ့ ကုံး(ငျ)ခနျြ
☞ လုပျခ အထိုကျအလြောကျတော့ ရပါလိမျ့မယျ။
☞ ဟော့တဲယျ ယိထနျြးတဲ့ပေါကျခြို ကြို့ရှငျ(ငျ)လဲာ့
☞ နတှေ့ကျရရငျ ပွီးရောပေါ့။
☞ ကြောကျထားတနျး(ငျ)ရဲငျ့r မဲငျဝပေ့ါ့
☞ သူ့ကို ဂိတျစောငျ့အလုပျ ပေးလိုကျပါ။
☞ ရဲငျ့rမငျြ့(ငျ)လဲာ့ထား ဝကေငျြး(ငျ)လီ
☞ သူ့ကို မနျနဂြောခနျ့လိုကျပွီ။
☞ ထီခြူးh ပေါကျကောကျလဲာ့မေးယို
☞ အစီရငျခံစာ တငျပွီးပွီလား။
☞ ထားမဲငျ ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ ထီခြူးhဆေးခြဲငျh(ငျ)
☞ သူတို့ ဘယျတုနျးက ထှကျစာတငျတာလဲ။
☞ ဝေါရှနျး(ငျ)ခငျြ(ငျ) ပနျ့ထနျြးကြာ့
☞ ငါ နတေ့ဝကျ ခှငျ့ယူခငျြတယျ။
☞ ကုံး(ငျ)ဇီးzကြောကျhဖားf ရှိုးကြာ့ ယီကဲာ့ယှဲ့
☞ လစာမပကျြ ခှငျ့တဈလပေးတယျ။
☞ နီလငျး(ငျ)ခြှီ ကုံး(ငျ)ဇီးzလဲာ့မား
☞ မငျး လခထုတျပွီးပွီလား။
☞ ဆုံ(ငျ)ယှဲ့ရှငျးကြုံးh(ငျ) ခို့ခြူh ရှငျ(ငျ)ပုရှငျ(ငျ)
☞ လခထဲက နှိမျလိုကျမယျ၊ ဖွဈမလား။
☞ ဆုံ(ငျ)ရှငျးရှေhကြုံးh(ငျ) ခို့လဲာ့ ဝူရှီhခှိုကျမကေငျြး
☞ လခထဲကနေ US$ 50 ဖွတျလိုကျတယျ။
☞ ဇဲငျzမဲာ့ခို့ ဝူရှီhထနျြးတဲ့ ခြီးhဖေ့f
☞ ဘာကွောငျ့ ၁၅ ရကျစာ ထမငျးစရိတျ ဖွတျလိုကျတာလဲ။
☞ ထငျး(ငျ)ရှောh ကုံး(ငျ)ရဲငျrယောငျးခြို ဇဲငျးz(ငျ)ကြားကုံး(ငျ)ဇီးz
☞ အလုပျသမားတှကေ လစာတိုးပေးဖို့ တောငျးဆိုနကွေတယျဆို။
☞ ရှဈhတနျ့(ငျ) ထီကောငျးလဲာ့ ကုံး(ငျ)ဇီးz
☞ လစာကို ထိုကျထိုကျတနျတနျ တိုးမွှငျ့ပေးပွီးပါပွီ။
☞ စှေးရှဈh ကငျြး(ငျ)လီ တနျ့ ဇာzခြီးဇာzပါးတိုးကနျ့
☞ မနျနဂြော ဖွဈပမေယျ့လညျး၊ အောကျခွသေိမျး အကုနျလုပျတယျ။
အလုပ်အကြောင်း - ၁ ။
10:02 PM C-Sentence , Chinese
အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိမိရင်ထဲက ပြောချင်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် ပြောတတ်အောင် ဝါကျတိုလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Gōngzuò duījī le hěn duō.
☞ ကုံး(င်)ဇော့zတွေးကျီးလဲာ့ ဟဲင်တော
☞ အလုပ်တွေ အများကြီး ကြွေးတင်နေတယ်။
☞ Zuìjìn gōngzuò yí ge jiē yí ge.
☞ ဇွေ့zကျင့် ကုံး(င်)ဇော့z ယီကဲာ့ကျဲယီကဲာ့
☞ အခုတလော အလုပ်တွေ တန်းစီနေတာပဲ။
☞ Bìxū dàngtiān wánchéng.
☞ ပိရွှီး တန့်(င်)ထျန်း ဝမ်းချဲင်h(င်)
☞ နေ့ချင်းပြီး လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။
☞ Gōngzuò yā de wǒmen duān bú guò qì lái.
☞ ကုံး(င်)ဇော့zယားတဲ့ ဝေါ်မဲင် တွမ်းပူကော့ချိလိုင်
☞ အလုပ်ပိပြီး ငါတို့ လုံးလည်လိုက်နေပြီ။
☞ Gàn zhè jiàn shì hěn fèi shíjiān.
☞ ကန့်ကျဲ့hကျန့်ရှစ်h ဟဲင်ဖေ့fရှီhကျန်း
☞ ဒီအလုပ်လုပ်ရတာ အရမ်း အချိန်ကုန်တာပဲ။
☞ Gōngzuò shùnlì de wánchéng le.
☞ ကုံး(င်)ဇော့z ရွှင့်hလိတဲ့ ဝမ်းချဲင်h(င်)လဲာ့
☞ အလုပ်ကိစ္စ ရှောရှောရှူရှူနဲ့ ပြီးသွားပြီ။
☞ Dàjiā yìqǐ gàn yíhuìr jiù wán.
☞ တာ့ကျား ယိချီကန့် ယီဟွေ့rကျို့ဝမ်
☞ အားလုံးဝိုင်းလုပ်လိုက်ရင် ခဏနဲ့ပြီးမှာပဲ။
☞ Búyào yǐngxiǎng biérén de gōngzuò.
☞ ပူယောက်ယင်း(င်)ရှန်(င်) ပြဲရဲင်rတဲ့ကုံး(င်)ဇော့z
☞ သူများအလုပ်ကို မထိခိုက်စေနဲ့။
☞ Zuò shí yào bìmiǎn chùfàn fǎlǜ.
☞ ဇော့zရှီh ယောက်ပိမြန် ချုhဖန့်fဖာfလွိ
☞ ဥပဒနဲ့ လွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။
☞ Búyào lànyòng zhíquán.
☞ ပူယောက်လန့်ယုံ့(င်) ကျီးhချွမ်
☞ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစား မလုပ်ပါနဲ့။
☞ Nǐmen yǒu yíngyè zhízhào ma?
☞ နီမဲင်းယို ယင်(င်)ယဲ့ကျီhကျောက်hမား
☞ မင်းတို့မှာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရှိလား။
☞ Lǎobǎn tèbié zhòngyòng fānyìyuán.
☞ လောင်းပန် ထဲ့ပြယ်ကျုံ့h(င်)ယုံ့(င်) ဖန်းfယိယွမ်
☞ သူဌေးက စကားပြန်ကို မျက်နှာသာပေးလွန်းတယ်။
☞ Tíngzhǐ nà jiàn gōngzuò le ma?
☞ ထင်း(င်)ကျီh နာ့ကျန့်ကုံး(င်)ဇော့zလဲာ့မား
☞ ဟိုအလုပ်ကို ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီလား။
☞ Jiē zhe gàn yuánlái de shì ba.
☞ ကျဲကျယ်hကန့် ယွမ်းလိုင်တဲ့ရှစ်hပါ့
☞ ရှိရင်းစွဲအလုပ်ကို ဆက်လုပ်ပေါ့။
☞ Zuò shénme shì dōu bù rúyì.
☞ ဇော့zရှဲhမဲာ့ရှစ်hတိုး ပုရူrယိ
☞ ဘာအလုပ်လုပ်လုပ် အပေါက်အလမ်းတည့်တယ်လို့ မရှိဘူး။
☞ Zhèyàng zuò hái bú suàn wán.
☞ ကျဲ့hယန့်(င်)ဇော့z ဟိုင်ပူစွမ့်ဝမ်
☞ ဒီလောက်လုပ်ရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူး။
☞ Xūyào zhēng fēn duó miǎo de gōngzuò.
☞ ရွှီးယောက် ကျဲင်းh(င်)ဖဲင်းfတောမြောင်တဲ့ ကုံး(င်)ဇော့z
☞ အချိန်လုပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။
☞ Bù xūyào fèi qǐn wàng shí de gōngzuò.
☞ ပုရွှီးယောက် ဖေ့fချင်ဝမ့်(င်)ရှီhတဲ့ ကုံး(င်)ဇော့z
☞ အအိပ်ပျက် အစားပျက်ခံပြီး လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။
အလုပျအကွောငျး - ၁ ။
အလုပျနဲ့ ပတျသကျပွီး မိမိရငျထဲက ပွောခငျြနတေဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ထဲထဲဝငျဝငျ ပွောတတျအောငျ ဝါကတြိုလေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ ကုံး(ငျ)ဇော့zတှေးကြီးလဲာ့ ဟဲငျတော
☞ အလုပျတှေ အမြားကွီး ကွှေးတငျနတေယျ။
☞ ဇှေ့zကငျြ့ ကုံး(ငျ)ဇော့z ယီကဲာ့ကြဲယီကဲာ့
☞ အခုတလော အလုပျတှေ တနျးစီနတောပဲ။
☞ ပိရှီး တနျ့(ငျ)ထနျြး ဝမျးခြဲငျh(ငျ)
☞ နခေ့ငျြးပွီး လုပျဖို့ လိုအပျတယျ။
☞ ကုံး(ငျ)ဇော့zယားတဲ့ ဝျေါမဲငျ တှမျးပူကော့ခြိလိုငျ
☞ အလုပျပိပွီး ငါတို့ လုံးလညျလိုကျနပွေီ။
☞ ကနျ့ကြဲ့hကနျြ့ရှဈh ဟဲငျဖေ့fရှီhကနျြး
☞ ဒီအလုပျလုပျရတာ အရမျး အခြိနျကုနျတာပဲ။
☞ ကုံး(ငျ)ဇော့z ရှငျ့hလိတဲ့ ဝမျးခြဲငျh(ငျ)လဲာ့
☞ အလုပျကိစ်စ ရှောရှောရှူရှူနဲ့ ပွီးသှားပွီ။
☞ တာ့ကြား ယိခြီကနျ့ ယီဟှေ့rကြို့ဝမျ
☞ အားလုံးဝိုငျးလုပျလိုကျရငျ ခဏနဲ့ပွီးမှာပဲ။
☞ ပူယောကျယငျး(ငျ)ရှနျ(ငျ) ပွဲရဲငျrတဲ့ကုံး(ငျ)ဇော့z
☞ သူမြားအလုပျကို မထိခိုကျစနေဲ့။
☞ ဇော့zရှီh ယောကျပိမွနျ ခြုhဖနျ့fဖာfလှိ
☞ ဥပဒနဲ့ လှတျလှတျကငျးကငျးဖွဈအောငျ လုပျပါ။
☞ ပူယောကျလနျ့ယုံ့(ငျ) ကြီးhခြှမျ
☞ လုပျပိုငျခှငျ့ကို အလှဲသုံးစား မလုပျပါနဲ့။
☞ နီမဲငျးယို ယငျ(ငျ)ယဲ့ကြီhကြောကျhမား
☞ မငျးတို့မှာ လုပျငနျးလိုငျစငျ ရှိလား။
☞ လောငျးပနျ ထဲ့ပွယျကြုံ့h(ငျ)ယုံ့(ငျ) ဖနျးfယိယှမျ
☞ သူဌေးက စကားပွနျကို မကျြနှာသာပေးလှနျးတယျ။
☞ ထငျး(ငျ)ကြီh နာ့ကနျြ့ကုံး(ငျ)ဇော့zလဲာ့မား
☞ ဟိုအလုပျကို ရပျဆိုငျးထားလိုကျပွီလား။
☞ ကြဲကယျြhကနျ့ ယှမျးလိုငျတဲ့ရှဈhပါ့
☞ ရှိရငျးစှဲအလုပျကို ဆကျလုပျပေါ့။
☞ ဇော့zရှဲhမဲာ့ရှဈhတိုး ပုရူrယိ
☞ ဘာအလုပျလုပျလုပျ အပေါကျအလမျးတညျ့တယျလို့ မရှိဘူး။
☞ ကြဲ့hယနျ့(ငျ)ဇော့z ဟိုငျပူစှမျ့ဝမျ
☞ ဒီလောကျလုပျရုံနဲ့ မပွီးသေးဘူး။
☞ ရှီးယောကျ ကြဲငျးh(ငျ)ဖဲငျးfတောမွောငျတဲ့ ကုံး(ငျ)ဇော့z
☞ အခြိနျလုပွီး အလုပျလုပျဖို့ လိုအပျတယျ။
☞ ပုရှီးယောကျ ဖေ့fခငျြဝမျ့(ငျ)ရှီhတဲ့ ကုံး(ငျ)ဇော့z
☞ အအိပျပကျြ အစားပကျြခံပွီး လုပျဖို့မလိုပါဘူး။
9:42 PM C-Sentence , Chinese
လူ့စိတ်ဆိုတာက အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတတ်တော့ အခန့်မသင့်ရင် ကတောက်ကဆဖြစ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဝါကျတိုလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Nǐ zěnme gēn tā chǎojià?
☞ နီးဇဲင်zမဲာ့ ကဲင်းထား ချောင်hကျာ့
☞ မင်း ဘာလို့ သူနဲ့ ကတောက်ကဆဖြစ်တာလဲ။
☞ Tāmen wèi shénme shì chǎojià?
☞ ထားမဲင် ဝေ့ ရှဲhမဲာ့ရှစ်h ချောင်hကျာ့
☞ သူတို့က ဘာကိစ္စအတွက်နဲ့ စကားများကြတာလဲ။
☞ Tā chángchang qīfù wǒ.
☞ ထား ချန်းh(င်)ချန်h(င်) ချီးဖုfဝေါ်
☞ သူ ငါ့ကို အမြဲတမ်း အနိုင်ကျင့်တယ်။
☞ Dé le, bié gēn tā zhēngchǎo le.
☞ တဲယ်လဲာ့ ပြယ်ကဲင်းထား ကျဲင်းh(င်)ချောင်hလဲာ့
☞ တော်ပြီ၊ သူနဲ့ ရန်ဖြစ်မနေနဲ့တော့။
☞ Tāmen liǎ chǎo guo yòu héhǎo le.
☞ ထားမဲင်းလျာ ချောင်hကော့ ယို့ဟဲယ်းဟောင်လဲာ့
☞ သူတို့နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ပြီးနောက် ပြန်ပြေလည်သွားပြီ။
☞ Wǒmen liǎ cónglái bù chǎojià.
☞ ဝေါ်မဲင်းလျာ ဆုံး(င်)လိုင် ပုချောင်hကျာ့
☞ ငါတို့နှစ်ယောက်က ဘယ်တော့မှ ရန်မဖြစ်ကြဘူး။
☞ Yì cháng zhēngchǎo shǐ tā yǔ wǒmen shūyuǎn le.
☞ ယိချန်h(င်)ကျဲင်းh(င်)ချောင်h ရှီhထားယွီဝေါ်မဲင် ရှူးhယွမ်လဲာ့
☞ ရန်တစ်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက် သူက ငါတို့နဲ့ ခပ်တန်းတန်းဖြစ်သွားတယ်။
☞ Tāmen liǎ yòu chǎojià le.
☞ ထားမဲင်းလျာ ယို့ချောင်hကျာ့လဲာ့
☞ သူတို့နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ကြပြန်ပြီ။
☞ Shéi qù tiáohé yíxià?
☞ ရှေhချွိ ထျောင်းဟဲယ်ယီရှာ့
☞ Wèile liǎng bǎi kuài, tā gēn diànyuán chǎo qǐlái le.
☞ ဝေ့လဲာ့ လျန်း(င်)ပိုင်ခွိုက် ထားကဲင်းတျန့်ယွမ် ချောင်hကျာ့လဲာ့
☞ ပိုက်ဆံလေးနှစ်ရာအတွက်နဲ့ အရောင်းစာရေးနဲ့ သူရန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
☞ Yīngwèi tā cóngzhōng dǎoluàn, wǒmen fūqī chǎojià le.
☞ ယင်းဝေ့ ထား ဆုံ(င်)ကျုံးh(င်)တောင်လွမ့် ဝေါ်မဲင်ဖူးfချီး ချောင်hကျာ့လဲာ့
☞ သူဂြိုဟ်မွှေလို့ ငါတို့လင်မယား ရန်ဖြစ်ရပြီ။
☞ Nǐ bāng le dàománg.
☞ နီပန်း(င်)လဲာ့ တောက်မန်(င်)
☞ မင်းကူရှင်းပေးတော့မှ ပိုရှုပ်ကုန်ပြီ။
☞ Tāmen de guānxi zhēn shì fùzá de hěn.
☞ ထားမဲင်တဲ့ကွမ်းရှိ ကျဲင်းhရှစ်h ဖုfဇာzတဲ့ဟဲင်
☞ သူတို့ဇာတ်လမ်းက သပွတ်အူပဲ။
☞ Zhèlǐ méiyǒu tā shénme yǐngxiǎng.
☞ ကျဲ့hလီမေးယို ထားရှဲhမဲာ့ယင်း(င်)ရှန်(င်)
☞ ဒီထဲမှာ သူ့ပယောဂ မပါဘူး။
☞ Búyào shuō huà hěn nántīng.
☞ ပူယောက် ရှောhဟွာ့ ဟဲင်နန်ထင်း(င်)
☞ စကားကို ရင့်ရင့်သီးသီး မပြောပါနဲ့။
☞ Bù mǎnyì jiù zhí shuō.
☞ ပုမန်ယိ ကျို့ကျီhရှောh
☞ မကျေနပ်ရင် ဒဲ့ပြောပါ။
☞ Nǐmen liǎ zài zhēnglùn shénme wèntí?
☞ နီမဲင်းလျာ ဇိုက်zကျဲင်းh(င်)လွင့် ရှဲhမဲာ့ဝဲင့်ထီ
☞ မင်းတို့နှစ်ယောက် ဘာတွေငြင်းနေကြတာလဲ။
☞ Rúguǒ bù zhīdào nǐ jiù bié zuòshēng.
☞ ရူးrကော် ပုကျီးhတောက် နီကျို့ပြယ်ဇော့zရှဲင်းh(င်)
☞ မင်းမသိရင် အသာနေစမ်းပါ။
လူ့စိတျဆိုတာက အခြိနျနဲ့အမြှ ပွောငျးလဲနတေတျတော့ အခနျ့မသငျ့ရငျ ကတောကျကဆဖွဈလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဝါကတြိုလေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ နီးဇဲငျzမဲာ့ ကဲငျးထား ခြောငျhကြာ့
☞ မငျး ဘာလို့ သူနဲ့ ကတောကျကဆဖွဈတာလဲ။
☞ ထားမဲငျ ဝေ့ ရှဲhမဲာ့ရှဈh ခြောငျhကြာ့
☞ သူတို့က ဘာကိစ်စအတှကျနဲ့ စကားမြားကွတာလဲ။
☞ ထား ခနျြးh(ငျ)ခနျြh(ငျ) ခြီးဖုfဝျေါ
☞ သူ ငါ့ကို အမွဲတမျး အနိုငျကငျြ့တယျ။
☞ တဲယျလဲာ့ ပွယျကဲငျးထား ကြဲငျးh(ငျ)ခြောငျhလဲာ့
☞ တျောပွီ၊ သူနဲ့ ရနျဖွဈမနနေဲ့တော့။
☞ ထားမဲငျးလြာ ခြောငျhကော့ ယို့ဟဲယျးဟောငျလဲာ့
☞ သူတို့နှဈယောကျ ရနျဖွဈပွီးနောကျ ပွနျပွလေညျသှားပွီ။
☞ ဝျေါမဲငျးလြာ ဆုံး(ငျ)လိုငျ ပုခြောငျhကြာ့
☞ ငါတို့နှဈယောကျက ဘယျတော့မှ ရနျမဖွဈကွဘူး။
☞ ယိခနျြh(ငျ)ကြဲငျးh(ငျ)ခြောငျh ရှီhထားယှီဝျေါမဲငျ ရှူးhယှမျလဲာ့
☞ ရနျတဈပှဲဖွဈပွီးနောကျ သူက ငါတို့နဲ့ ခပျတနျးတနျးဖွဈသှားတယျ။
☞ ထားမဲငျးလြာ ယို့ခြောငျhကြာ့လဲာ့
☞ သူတို့နှဈယောကျ ရနျဖွဈကွပွနျပွီ။
☞ ရှေhခြှိ ထြောငျးဟဲယျယီရှာ့
☞ ဝလေဲ့ာ့ လနျြး(ငျ)ပိုငျခှိုကျ ထားကဲငျးတနျြ့ယှမျ ခြောငျhကြာ့လဲာ့
☞ ပိုကျဆံလေးနှဈရာအတှကျနဲ့ အရောငျးစာရေးနဲ့ သူရနျဖွဈခဲ့တယျ။
☞ ယငျးဝေ့ ထား ဆုံ(ငျ)ကြုံးh(ငျ)တောငျလှမျ့ ဝျေါမဲငျဖူးfခြီး ခြောငျhကြာ့လဲာ့
☞ သူဂွိုဟျမှလေို့ ငါတို့လငျမယား ရနျဖွဈရပွီ။
☞ နီပနျး(ငျ)လဲာ့ တောကျမနျ(ငျ)
☞ မငျးကူရှငျးပေးတော့မှ ပိုရှုပျကုနျပွီ။
☞ ထားမဲငျတဲ့ကှမျးရှိ ကြဲငျးhရှဈh ဖုfဇာzတဲ့ဟဲငျ
☞ သူတို့ဇာတျလမျးက သပှတျအူပဲ။
☞ ကြဲ့hလီမေးယို ထားရှဲhမဲာ့ယငျး(ငျ)ရှနျ(ငျ)
☞ ဒီထဲမှာ သူ့ပယောဂ မပါဘူး။
☞ ပူယောကျ ရှောhဟှာ့ ဟဲငျနနျထငျး(ငျ)
☞ စကားကို ရငျ့ရငျ့သီးသီး မပွောပါနဲ့။
☞ ပုမနျယိ ကြို့ကြီhရှောh
☞ မကနြေပျရငျ ဒဲ့ပွောပါ။
☞ နီမဲငျးလြာ ဇိုကျzကြဲငျးh(ငျ)လှငျ့ ရှဲhမဲာ့ဝဲငျ့ထီ
☞ မငျးတို့နှဈယောကျ ဘာတှငွေငျးနကွေတာလဲ။
☞ ရူးrကျော ပုကြီးhတောကျ နီကြို့ပွယျဇော့zရှဲငျးh(ငျ)
☞ မငျးမသိရငျ အသာနစေမျးပါ။
10:03 PM C-Sentence , Chinese
သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော်ဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ပွဲတော်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ရွှင်လန်းကြပါစေ။
☞ Dào miǎnlì qīyuè fèn le.
☞ တောက် မြန်လိချီးယွဲ့ဖဲင့်fလဲာ့
☞ Jīntiān shì miǎnlì qīyuè diǎndēngjié.
☞ ကျင်းထျန်းရှစ်h မြန်လိချီးယွဲ့ တျန်တဲင်း(င်)ကျယ်
☞ ဒီနေ့က သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော်နေ့ပါ။
☞ Yě shì miǎnlì qīyuè de yuèyuánrì.
☞ ယယ်ရှစ်h မြန်လိချီးယွဲ့တဲ့ ယွဲ့ယွမ်ရွတ်r
☞ သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
☞ Jiù shì gōngxiūrì.
☞ ကျို့ရှစ်h ကုံး(င်)ရှိုးရွတ်r
☞ အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်ပေါ့။
☞ Zǎoshang qù Dàjīntǎ bàifó.
☞ ဇောင်zရှန့်h(င်) ချွိတာ့ကျင်းထာ ပိုက်ဖော်f
☞ မနက်ပိုင်းမှာ ရွှေတိဂုံစေတီသွားပြီး ဘုရားကန်တော့ကြပါတယ်။
☞ Rénren dōu zuò shànshì.
☞ ရဲင်းrရဲင်rတိုး ဇော့zရှန့်hရှစ်h
☞ လူတိုင်းလူတိုင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ လုပ်ကြပါတယ်။
☞ Zǐnǚ gěi lǎorénjiā sònglǐ kòubài.
☞ ဇီးzနွီကေလောင်ရဲင်rကျား စုန့်(င်)လီခို့ပိုက်
☞ သားသမီးတွေက လူကြီးမိဘတွေကို လက်ဆောင်နဲ့ ကန်တော့ကြတယ်။
☞ Zhè shì miǎndiànrén de fēngsú xíguàn.
☞ ကျဲ့hရှစ်h မြန်တျန့်ရဲင်rတဲ့ ဖဲင်းf(င်)စူးရှီကွမ့်
☞ ဒါဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ရိုးရာဓလေ့ပါ။
☞ Xiàwǔ jǔxíng yìmài shìjí.
☞ ရှာ့ဝူ ကျွီရှင်(င်) ယိမိုက်ရှစ်hကျီ
☞ ညနေပိုင်းမှာ နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော် ကျင်းပကြမယ်။
☞ Dàochù dōu yǒu jiérì shènghuì.
☞ တောက်ချုhတိုးယို ကျယ်ရွတ်rရှဲင့်h(င်)ဟွေ့
☞ နေရာတိုင်းမှာ ပျော်ပွဲသဘင်တွေ ရှိကြပါတယ်။
☞ Jīnwǎn jǔbàn fēngfù duōcǎi de dēnghuì.
☞ ကျင်းဝမ် ကျွီပန့် ဖဲင်းf(င်)ဖုfတောဆိုင်တဲ့ တဲင်း(င်)ဟွေ့
☞ ဒီနေ့ညမှာ ရောင်စုံမီးထွန်းပွဲတော်ကြီး ကျင်းပကြမယ်။
☞ Xiǎopéngyǒu dōu fàng zhe biānpào.
☞ ရှောင်ဖဲင်း(င်)ယိုတိုး ဖန့်f(င်)ကျယ်hပြန်းဖောက်
☞ ကလေးတွေလည်း ဗျောက်အိုးတွေ ဖောက်နေကြတယ်။
☞ Yǒude fàng zhe yānhuā.
☞ ယိုတဲ့ ဖန့်f(င်)ကျယ်hယန်းဟွား
☞ တချို့က မီးပန်းတွေ လွှတ်နေကြတယ်။
☞ Dēngjié zhī yè fēicháng rè nào.
☞ တဲင်း(င်)ကျယ်ကျီးhယဲ့ ဖေးfချန်h(င်)ရဲ့rနောက်
☞ မီးထွန်းပွဲတော်ညက အရမ်း စည်ကားပါတယ်။
☞ Jiājia hùhu dōu diǎn dēng xiàng fó shànggòng.
☞ ကျားကျားဟုဟုတိုး တျန်တဲင်း(င်) ရှန့်(င်)ဖော်fရှန့်h(င်)ကုံ့(င်)
☞ အိမ်တိုင်းမှာ မီးထွန်းပြီး မြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်ကြပါတယ်။
☞ Nánnǚ lǎoshǎo dōu cānjiā dēnghuì.
☞ နန်းနွီလောင်းရှောင်hတိုး ဆန်းကျားတဲင်း(င်)ဟွေ့
☞ ကလေးလူကြီး ကျားမမရွေး မီးထွန်းပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲကြပါတယ်။
☞ Wǒmen dàjiā dōu kāixīn de hěn.
☞ ဝေါ်မဲင်တာ့ကျားတိုး ခိုင်းရှင်းတဲ့ဟဲင်
☞ ငါတို့အားလုံး အရမ်း ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်။
☞ Zhù nǐmen jiérì kuàilè!
☞ ကျုhနီမဲင် ကျယ်ရွတ်rခွိုက်လဲာ့
☞ ပွဲတော်ရက်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ သင်တို့ကို ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သီတငျးကြှတျ မီးထှနျးပှဲတျောဟာ မွနျမာလူမြိုးတှရေဲ့ ရိုးရာယဉျကြေးမှု ပှဲတျောနဖွေ့ဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာ အားလုံး ကိုယျစိတျနှဈဖွာ ရှငျလနျးကွပါစေ။
☞ တောကျ မွနျလိခြီးယှဲ့ဖဲငျ့fလဲာ့
☞ ကငျြးထနျြးရှဈh မွနျလိခြီးယှဲ့ တနျြတဲငျး(ငျ)ကယျြ
☞ ဒီနကေ့ သီတငျးကြှတျ မီးထှနျးပှဲတျောနပေ့ါ။
☞ ယယျရှဈh မွနျလိခြီးယှဲ့တဲ့ ယှဲ့ယှမျရှတျr
☞ သီတငျးကြှတျ လပွညျ့နလေ့ညျး ဖွဈပါတယျ။
☞ ကြို့ရှဈh ကုံး(ငျ)ရှိုးရှတျr
☞ အစိုးရ ရုံးပိတျရကျပေါ့။
☞ ဇောငျzရှနျ့h(ငျ) ခြှိတာ့ကငျြးထာ ပိုကျဖျောf
☞ မနကျပိုငျးမှာ ရှတေိဂုံစတေီသှားပွီး ဘုရားကနျတော့ကွပါတယျ။
☞ ရဲငျးrရဲငျrတိုး ဇော့zရှနျ့hရှဈh
☞ လူတိုငျးလူတိုငျး ကုသိုလျကောငျးမှုတှေ လုပျကွပါတယျ။
☞ ဇီးzနှီကလေောငျရဲငျrကြား စုနျ့(ငျ)လီခို့ပိုကျ
☞ သားသမီးတှကေ လူကွီးမိဘတှကေို လကျဆောငျနဲ့ ကနျတော့ကွတယျ။
☞ ကြဲ့hရှဈh မွနျတနျြ့ရဲငျrတဲ့ ဖဲငျးf(ငျ)စူးရှီကှမျ့
☞ ဒါဟာ မွနျမာလူမြိုးတှရေဲ့ ယဉျကြေးမှု ရိုးရာဓလပေ့ါ။
☞ ရှာ့ဝူ ကြှီရှငျ(ငျ) ယိမိုကျရှဈhကြီ
☞ ညနပေိုငျးမှာ နိဗ်ဗာနျဈေးပှဲတျော ကငျြးပကွမယျ။
☞ တောကျခြုhတိုးယို ကယျြရှတျrရှဲငျ့h(ငျ)ဟှေ့
☞ နရောတိုငျးမှာ ပြျောပှဲသဘငျတှေ ရှိကွပါတယျ။
☞ ကငျြးဝမျ ကြှီပနျ့ ဖဲငျးf(ငျ)ဖုfတောဆိုငျတဲ့ တဲငျး(ငျ)ဟှေ့
☞ ဒီနညေ့မှာ ရောငျစုံမီးထှနျးပှဲတျောကွီး ကငျြးပကွမယျ။
☞ ရှောငျဖဲငျး(ငျ)ယိုတိုး ဖနျ့f(ငျ)ကယျြhပွနျးဖောကျ
☞ ကလေးတှလေညျး ဗြောကျအိုးတှေ ဖောကျနကွေတယျ။
☞ ယိုတဲ့ ဖနျ့f(ငျ)ကယျြhယနျးဟှား
☞ တခြို့က မီးပနျးတှေ လှတျနကွေတယျ။
☞ တဲငျး(ငျ)ကယျြကြီးhယဲ့ ဖေးfခနျြh(ငျ)ရဲ့rနောကျ
☞ မီးထှနျးပှဲတျောညက အရမျး စညျကားပါတယျ။
☞ ကြားကြားဟုဟုတိုး တနျြတဲငျး(ငျ) ရှနျ့(ငျ)ဖျောfရှနျ့h(ငျ)ကုံ့(ငျ)
☞ အိမျတိုငျးမှာ မီးထှနျးပွီး မွတျစှာဘုရားကို ပူဇျောကွပါတယျ။
☞ နနျးနှီလောငျးရှောငျhတိုး ဆနျးကြားတဲငျး(ငျ)ဟှေ့
☞ ကလေးလူကွီး ကြားမမရှေး မီးထှနျးပှဲတျောကို ဆငျနှဲကွပါတယျ။
☞ ဝျေါမဲငျတာ့ကြားတိုး ခိုငျးရှငျးတဲ့ဟဲငျ
☞ ငါတို့အားလုံး အရမျး ပြျောရှငျကွပါတယျ။
☞ ကြုhနီမဲငျ ကယျြရှတျrခှိုကျလဲာ့
☞ ပှဲတျောရကျမှာ ပြျောရှငျကွပါစလေို့ သငျတို့ကို ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
9:47 PM C-Quiz , Chinese
ဒီနေ့ ပို့ချပေးမယ့် ဉာဏ်စမ်း လေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့ အသီဖျော်ရည်များနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြေဆိုကြည့်ကြပါအုံးနော်။
YouTube တွင် ကြည့်ရန် - Link
9:40 PM C-Quiz , Chinese
ဒီနေ့အတွက် ပို့ချပေးထားတဲ့ ဉာဏ်စမ်းလေးကို ဖြေဆိုကြည့်ပါအုံးနော်။ ဝေါဟာရများကို မှတ်သားဖို့နဲ့ နားထောင်စွမ်းရည် မြှင့်တင်ဖို့ နေ့စဉ် ဖြေဆိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
9:30 PM C-Quiz , Chinese
တစ်နေ့ကို ဝေါဟာရငါးလုံးစီ လေ့ကျင့်သွားရင်း ဗီဒီယိုဉာဏ်စမ်းလေးတွေကို ဖြေဆိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဖြေများကို Comment တွင် ရေးသားကြည့်ပါ။
9:21 PM C-Quiz , Chinese
ဉာဏ်စမ်း လေ့ကျင့်ခန်း သင်ခန်းစာတွေကို ဆက်လက် လေ့ကျင့်ကြပါစို့။ မိမိရဲ့ အဖြေမှန်ကို Comment မှာ ရေးသားဖြေဆိုကြည့်ပါ။
9:05 PM C-Quiz , Chinese
ဒီနေ့မှာတော့ ဉာဏ်စမ်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးနဲ့ ပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အဖြေကို အောက်မှာ ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
YouTube တွင်ကြည့်ရန် - Link
2:21 AM C-Dialogue , Chinese
ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ လမုန့်ပွဲတော်နေ့မှာ မိုးအုံ့နေတော့ ကောင်းကင်ပေါ်က လမင်းကြီးကို မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာတော့ မျှဝေရှုစားလို့ရပါတယ်။
☞ Nǐ zhīdào jīntiān shì shénme rìzi ma?
☞ နီကျီးhတောက် ကျင်းထျန်းရှစ်h ရှဲhမဲာ့ရွတ်rဇစ်zမား
☞ ဒီနေ့ ဘာနေ့ထူးလဲ မင်းသိလား။
☞ Jīntiān bú shì wǒ de shēngrì, yě bú shì nǐ de shēngrì, méi shénme tèbié de ya.
☞ ကျင်းထျန်း ပူရှစ်h ဝေါ်တဲ့ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r ယယ်ပူရှစ်h နီတဲ့ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r မေရှဲhမဲာ့ ထဲ့ပြယ်တဲ့ယား
☞ ဒီနေ့က မင်းမွေးနေ့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ငါ့မွေးနေ့လည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာထူးခြားမှုမှ မရှိပါဘူး။
☞ Jīntiān shì nónglì bāyuè shíwǔ, zhōngqiūjié!
☞ ကျင်းထျန်းရှစ်h နုံ(င်)လိပါးယွဲ့ရှီးhဝူ ကျုံးh(င်)ချိုးကျယ်
☞ ဒီနေ့က တရုတ်ပြက္ခဒိန် ရှစ်လပိုင်း ၁၅ ရက်နေ့ပါ၊ လမုန့်ပွဲတော်နေ့ပေါ့။
☞ Ò, wǒ tīng shuō guo zhōngqiūjié, jīntiān yīnggāi chī yuèbǐng.
☞ အော့ ဝေါ်ထင်း(င်)ရှောhကော့ ကျုံးh(င်)ချိုးကျယ် ကျင်းထျန်း ယင်း(င်)ကိုင်းချီးhယွဲ့ပျင်(င်)
☞ သြော်၊ လမုန့်ပွဲတော်နေ့ကို ငါပြောသံကြားဖူးတယ်၊ ဒီနေ့ လမုန့်စားကြတော့မှာပေါ့နော်။
☞ Duì. Chúle chī yuèbǐng yǐwài, wǒmen hái yào shǎngyuè.
☞ တွေ့ ချူhလဲာ့ ချီးhယွဲ့ပျင်(င်)ယီဝိုက် ဝေါ်မဲင် ဟိုင်ယောက်ရှန်h(င်)ယွဲ့
☞ ဟုတ်ပါတယ်။ လမုန့်စားတာအပြင် ငါတို့က လမင်းကြီးကိုလည်း ရှုစားကြအုံးမယ်။
☞ Kěshì jīntiān Shànghǎi shì yīntiān, kǒngpà wǎnshang kàn bú dào yuèliang.
☞ ခဲယ်ရှစ်h ကျင်းထျန်း ရှန့်h(င်)ဟိုင်ရှစ်hယင်းထျန်း ခုံ(င်)ဖာ့ ဝမ်ရှန့်h(င်)ခန့်ပူတောက်ယွဲ့လျန့်(င်)
☞ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ရှန်ဟိုင်းမှာ မိုးအုံ့နေတယ်လေ၊ ညဘက်မှာ လမင်းကြီးကို မမြင်ရမှာစိုးမိတယ်။
☞ Bié dānxīn, wǒmen kěyǐ zài wǎngshang kàn yuèliang.
☞ ပြယ်တန်းရှင်း ဝေါ်မဲင်ခဲယ်းယီ ဇိုက်zဝမ်(င်)ရှန့်h(င်) ခန့်ယွဲ့လျန့်(င်)
☞ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါတို့က လမင်းကြီးကို အွန်လိုင်းကနေ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
☞ Zěnme kàn?
☞ Rénmen pāi le yuèliang de zhàopiàn dōu huì fā dào wēibó shang, wǒmen yì shuā wēibó, jiù néng kàn dào quánguó gè dì de yuèliang le.
☞ ရဲင်းrမဲင် ဖိုင်းလဲာ့ယွဲ့လျန့်(င်)တဲ့ကျောက်hဖြန့် တိုးဟွေ့ဖားfတောက်ဝေးပေါ်ရှန့်h(င်) ဝေါ်မဲင် ယိရွှားhဝေးပေါ် ကျို့နဲင်(င်)ခန့်တောက် ချွမ်းကော်ကဲာ့တိတဲ့ယွဲ့လျန့်(င်)လဲာ့
☞ လူတွေက လမင်းကြီးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Weibo မှာ တင်ကြလိမ့်မယ်၊ ငါတို့က Weibo ကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ နေရာပေါင်းစုံက လမင်းကြီးကို ကြည့်လို့ရပြီလေ။
☞ Hǎo zhǔyì! Zhè jiù shì Zhōngguórén cháng shuō de ' qiān lǐ gòng chán juān ' a!
☞ ဟောင်းကျူhယိ ကျဲ့hကျို့ရှစ်h ကျုံးh(င်)ကောရဲင်r ချန်h(င်)ရှောhတဲ့ "ချန်းလီကုံ့(င်)ချန်hကျွမ်း" အား
☞ အကြံကောင်းတယ်။ ဒါက တရုတ်လူမျိုးတွေ အမြဲပြောပြောနေတဲ့ "လှပတဲ့လမင်းကြီးကို မျှဝေရှုစားခြင်း" ပဲပေါ့။
ဒီကနေ့ ကရြောကျတဲ့ လမုနျ့ပှဲတျောနမှေ့ာ မိုးအုံ့နတေော့ ကောငျးကငျပျေါက လမငျးကွီးကို မတှရေ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အှနျလိုငျးပျေါမှာတော့ မြှဝရှေုစားလို့ရပါတယျ။
☞ နီကြီးhတောကျ ကငျြးထနျြးရှဈh ရှဲhမဲာ့ရှတျrဇဈzမား
☞ ဒီနေ့ ဘာနထေူ့းလဲ မငျးသိလား။
☞ ကငျြးထနျြး ပူရှဈh ဝျေါတဲ့ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr ယယျပူရှဈh နီတဲ့ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr မရှေဲhမဲာ့ ထဲ့ပွယျတဲ့ယား
☞ ဒီနကေ့ မငျးမှေးနေ့ မဟုတျပါဘူး၊ ငါ့မှေးနလေ့ညျး မဟုတျပါဘူး၊ ဘာထူးခွားမှုမှ မရှိပါဘူး။
☞ ကငျြးထနျြးရှဈh နုံ(ငျ)လိပါးယှဲ့ရှီးhဝူ ကြုံးh(ငျ)ခြိုးကယျြ
☞ ဒီနကေ့ တရုတျပွက်ခဒိနျ ရှဈလပိုငျး ၁၅ ရကျနပေ့ါ၊ လမုနျ့ပှဲတျောနပေ့ေါ့။
☞ အော့ ဝျေါထငျး(ငျ)ရှောhကော့ ကြုံးh(ငျ)ခြိုးကယျြ ကငျြးထနျြး ယငျး(ငျ)ကိုငျးခြီးhယှဲ့ပငျြ(ငျ)
☞ သွျော၊ လမုနျ့ပှဲတျောနကေို့ ငါပွောသံကွားဖူးတယျ၊ ဒီနေ့ လမုနျ့စားကွတော့မှာပေါ့နျော။
☞ တှေ့ ခြူhလဲာ့ ခြီးhယှဲ့ပငျြ(ငျ)ယီဝိုကျ ဝျေါမဲငျ ဟိုငျယောကျရှနျh(ငျ)ယှဲ့
☞ ဟုတျပါတယျ။ လမုနျ့စားတာအပွငျ ငါတို့က လမငျးကွီးကိုလညျး ရှုစားကွအုံးမယျ။
☞ ခဲယျရှဈh ကငျြးထနျြး ရှနျ့h(ငျ)ဟိုငျရှဈhယငျးထနျြး ခုံ(ငျ)ဖာ့ ဝမျရှနျ့h(ငျ)ခနျ့ပူတောကျယှဲ့လနျြ့(ငျ)
☞ ဒါပမေယျ့ ဒီနေ့ ရှနျဟိုငျးမှာ မိုးအုံ့နတေယျလေ၊ ညဘကျမှာ လမငျးကွီးကို မမွငျရမှာစိုးမိတယျ။
☞ ပွယျတနျးရှငျး ဝျေါမဲငျခဲယျးယီ ဇိုကျzဝမျ(ငျ)ရှနျ့h(ငျ) ခနျ့ယှဲ့လနျြ့(ငျ)
☞ စိတျမပူပါနဲ့၊ ငါတို့က လမငျးကွီးကို အှနျလိုငျးကနေ ကွညျ့လို့ရပါတယျ။
☞ ရဲငျးrမဲငျ ဖိုငျးလဲာ့ယှဲ့လနျြ့(ငျ)တဲ့ကြောကျhဖွနျ့ တိုးဟှဖေ့ားfတောကျဝေးပျေါရှနျ့h(ငျ) ဝျေါမဲငျ ယိရှားhဝေးပျေါ ကြို့နဲငျ(ငျ)ခနျ့တောကျ ခြှမျးကျောကဲာ့တိတဲ့ယှဲ့လနျြ့(ငျ)လဲာ့
☞ လူတှကေ လမငျးကွီးကို ဓာတျပုံရိုကျပွီးတော့ Weibo မှာ တငျကွလိမျ့မယျ၊ ငါတို့က Weibo ကို ဝငျလိုကျတာနဲ့ တဈနိုငျငံလုံးရဲ့ နရောပေါငျးစုံက လမငျးကွီးကို ကွညျ့လို့ရပွီလေ။
☞ ဟောငျးကြူhယိ ကြဲ့hကြို့ရှဈh ကြုံးh(ငျ)ကောရဲငျr ခနျြh(ငျ)ရှောhတဲ့ "ခနျြးလီကုံ့(ငျ)ခနျြhကြှမျး" အား
☞ အကွံကောငျးတယျ။ ဒါက တရုတျလူမြိုးတှေ အမွဲပွောပွောနတေဲ့ "လှပတဲ့လမငျးကွီးကို မြှဝရှေုစားခွငျး" ပဲပေါ့။
2:15 AM C-Dialogue , Chinese
လမုန့်ပွဲတော်ဆိုတာ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ အထင်ကရပွဲတော်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြောပုံစံလေးကို လေ့လာကြည့်ပါစို့။
☞ Wǒmen jīnwǎn qù kàn yuèliang ba!
☞ ဝေါ်မဲင် ကျင်းဝမ် ချွိခန့်ယွဲ့လျန့်(င်)ပါ့
☞ ငါတို့ ဒီည လသွားကြည့်ကြစို့။
☞ Yīnwèi jīntiān shì zhōngqiūjié.
☞ ယင်းဝေ့ ကျင်းထျန်းရှစ်h ကျုံးh(င်)ချုံးကျယ်
☞ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့က လမုန့်ပွဲတော်နေ့လေ။
☞ Zhōngqiūjié shì shénme?
☞ ကျုံးh(င်)ချုံးကျယ် ရှစ်h ရှဲhမဲာ့
☞ လမုန့်ပွဲတော်နေ့ဆိုတာ ဘာလဲ။
☞ Zhōngqiūjié shì yí ge jiérì. Zhōngqiūjié zhètiān, yuèliang shì zuì yuán zuì dà de. Zhōngguórén dōu xǐhuan zài zhōngqiūjié kàn yuèliang, chī yuèbǐng.
☞ ကျုံးh(င်)ချုံးကျယ် ရှစ်h ယီကဲာ့ကျယ်ရွတ်r ကျုံးh(င်)ချုံးကျယ်ကျဲ့hထျန်း ယွဲ့လျန့်(င်)ရှစ်h ဇွေ့zယွမ် ဇွေ့zတာ့တဲ့ ကျုံးh(င်)ကောရဲင်r တိုးရှီဟွမ်း ဇိုက်zကျုံးh(င်)ချုံးကျယ် ခန့်ယွဲ့လျန့်(င်) ချီးhယွဲ့ပျင်(င်)
☞ လမုန့်ပွဲတော်နေ့ဆိုတာ ပွဲတော်ရက်တစ်ရက်ပါ။ လမုန့်ပွဲတော်နေ့မှာ လမင်းကြီးက ဝိုင်းဝိုင်းစက်စက် အကြီးကြီးပဲ။ တရုတ်လူမျိုးတွေက လမုန့်ပွဲတော်နေ့မှာ လမင်းကြီးကို ရှုစားရင်း လမုန့်စားကြတယ်လေ။
☞ Hǎo ba! Dànshì jīnwǎn huì xiàyǔ.
☞ ဟောင်ပါ့ တန့်ရှစ်h ကျင်းဝမ် ဟွေ့ရှာ့ယွီ
☞ ကောင်းပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီည မိုးရွာလိမ့်မယ်။
☞ A? Bú huì ba......
☞ အာ့ ပူဟွေ့ပါ့
☞ အာ၊ မရွာလောက်ပါဘူး။
လမုနျ့ပှဲတျောဆိုတာ တရုတျလူမြိုးတှရေဲ့ အထငျကရပှဲတျောတဈခု ဖွဈပါတယျ။ စကားပွောပုံစံလေးကို လလေ့ာကွညျ့ပါစို့။
☞ ဝျေါမဲငျ ကငျြးဝမျ ခြှိခနျ့ယှဲ့လနျြ့(ငျ)ပါ့
☞ ငါတို့ ဒီည လသှားကွညျ့ကွစို့။
☞ ယငျးဝေ့ ကငျြးထနျြးရှဈh ကြုံးh(ငျ)ခြုံးကယျြ
☞ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနကေ့ လမုနျ့ပှဲတျောနလေ့ေ။
☞ ကြုံးh(ငျ)ခြုံးကယျြ ရှဈh ရှဲhမဲာ့
☞ လမုနျ့ပှဲတျောနဆေို့တာ ဘာလဲ။
☞ ကြုံးh(ငျ)ခြုံးကယျြ ရှဈh ယီကဲာ့ကယျြရှတျr ကြုံးh(ငျ)ခြုံးကယျြကြဲ့hထနျြး ယှဲ့လနျြ့(ငျ)ရှဈh ဇှေ့zယှမျ ဇှေ့zတာ့တဲ့ ကြုံးh(ငျ)ကောရဲငျr တိုးရှီဟှမျး ဇိုကျzကြုံးh(ငျ)ခြုံးကယျြ ခနျ့ယှဲ့လနျြ့(ငျ) ခြီးhယှဲ့ပငျြ(ငျ)
☞ လမုနျ့ပှဲတျောနဆေို့တာ ပှဲတျောရကျတဈရကျပါ။ လမုနျ့ပှဲတျောနမှေ့ာ လမငျးကွီးက ဝိုငျးဝိုငျးစကျစကျ အကွီးကွီးပဲ။ တရုတျလူမြိုးတှကေ လမုနျ့ပှဲတျောနမှေ့ာ လမငျးကွီးကို ရှုစားရငျး လမုနျ့စားကွတယျလေ။
☞ ဟောငျပါ့ တနျ့ရှဈh ကငျြးဝမျ ဟှရှေ့ာ့ယှီ
☞ ကောငျးပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ ဒီည မိုးရှာလိမျ့မယျ။
☞ အာ့ ပူဟှပေ့ါ့
☞ အာ၊ မရှာလောကျပါဘူး။
2:09 AM C-Dialogue , Chinese
ဆိုင်မှာ လက်ဘက်ရည် သွားဝယ်တဲ့အခါ ပြောဆိုကြပုံလေးတွေကို စကားပြောပုံစံ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Nǐ hǎo! Nǐ yào hē diǎn shénme?
☞ နီးဟောင် နီယောက်ဟဲယ်းတျန် ရှဲhမဲာ့
☞ မင်္ဂလာပါ။ ခင်ဗျား ဘာသောက်မလဲ။
☞ Wǒ yào yìbēi zhēnzhū nǎichá.
☞ ဝေါ်ယောက် ယိပေးကျဲင်းhကျူးhနိုင်ချာh
☞ ကျွန်တော် နှင်းပုလဲလက်ဘက်ရည်တစ်ခွက် ယူမယ်။
☞ Nǐ yào rède háishì bīngde?
☞ နီယောက် ရဲ့rတဲ့ ဟိုင်ရှစ်h ပျင်း(င်)တဲ့
☞ ခင်ဗျား အပူယူမလား၊ အအေးယူမလား။
☞ Wǒ yào bīngde. Háiyǒu, Máfan shǎo jiā yìdiǎn táng, wǒ bù xǐhuan tài tián de.
☞ ဝေါ်ယောက် ပျင်း(င်)တဲ့ ဟိုင်းယို မားဖန်f ရှောင်hကျားယိတျန်ထန်(င်) ဝေါ်ပုရှီဟွမ်း ထိုက်ထျန်တဲ့
☞ ကျွန်တော် အအေးယူမယ်။ နောက်ပြီး သကြားနည်းနည်း လျှော့ထည့်ပါ၊ ကျွန်တော် အရမ်းချိုတာ မကြိုက်ဘူး။
☞ Méi wèntí, yìbēi zhēnzhū nǎichá, shǎo táng. Bā kuài qián, xièxie.
☞ မေဝဲင့်ထီ ယိပေး ကျဲင်းhကျူးhနိုင်ချာh ရှောင်hထန်(င်) ပါးခွိုက်ချန် ရှဲ့ရှဲ့
☞ ရပါတယ်၊ နှင်းပုလဲ လက်ဘက်ရည်တစ်ခွက်၊ သကြားလျှော့မယ်။ ရှစ်ကျပ်ကျပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါ။
☞ Nǐ de zhēnzhū nǎichá hǎo le, xiànzài hē háishì dàizǒu?
☞ နီတဲ့ ကျဲင်းhကျူးhနိုင်ချာh ဟောင်လဲာ့ ရှန့်ဇိုက်zဟဲယ်း ဟိုင်ရှစ်h တိုက်ဇိုz
☞ ခင်ဗျားရဲ့ နှင်းပုလဲ လက်ဘက်ရည် ရပါပြီ၊ အခု သောက်မလား၊ ပါဆယ်လား။
☞ Hǎode, gěi nǐ. Huānyíng xiàcì zài lái!
☞ ဟောင်တဲ့ ကေးနီ ဟွမ်းယင်(င်) ရှာ့ဆစ်ဇိုက်zလိုင်
☞ ကောင်းပါပြီ၊ ဒီမှာပါ။ နောက်လည်း လာအားပေးပါ။
ဆိုငျမှာ လကျဘကျရညျ သှားဝယျတဲ့အခါ ပွောဆိုကွပုံလေးတှကေို စကားပွောပုံစံ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ နီးဟောငျ နီယောကျဟဲယျးတနျြ ရှဲhမဲာ့
☞ မင်ျဂလာပါ။ ခငျဗြား ဘာသောကျမလဲ။
☞ ဝျေါယောကျ ယိပေးကြဲငျးhကြူးhနိုငျခြာh
☞ ကြှနျတျော နှငျးပုလဲလကျဘကျရညျတဈခှကျ ယူမယျ။
☞ နီယောကျ ရဲ့rတဲ့ ဟိုငျရှဈh ပငျြး(ငျ)တဲ့
☞ ခငျဗြား အပူယူမလား၊ အအေးယူမလား။
☞ ဝျေါယောကျ ပငျြး(ငျ)တဲ့ ဟိုငျးယို မားဖနျf ရှောငျhကြားယိတနျြထနျ(ငျ) ဝျေါပုရှီဟှမျး ထိုကျထနျြတဲ့
☞ ကြှနျတျော အအေးယူမယျ။ နောကျပွီး သကွားနညျးနညျး လြှော့ထညျ့ပါ၊ ကြှနျတျော အရမျးခြိုတာ မကွိုကျဘူး။
☞ မဝေဲငျ့ထီ ယိပေး ကြဲငျးhကြူးhနိုငျခြာh ရှောငျhထနျ(ငျ) ပါးခှိုကျခနျြ ရှဲ့ရှဲ့
☞ ရပါတယျ၊ နှငျးပုလဲ လကျဘကျရညျတဈခှကျ၊ သကွားလြှော့မယျ။ ရှဈကပျြကပြါတယျ၊ ကြေးဇူးပါ။
☞ နီတဲ့ ကြဲငျးhကြူးhနိုငျခြာh ဟောငျလဲာ့ ရှနျ့ဇိုကျzဟဲယျး ဟိုငျရှဈh တိုကျဇိုz
☞ ခငျဗြားရဲ့ နှငျးပုလဲ လကျဘကျရညျ ရပါပွီ၊ အခု သောကျမလား၊ ပါဆယျလား။
☞ ဟောငျတဲ့ ကေးနီ ဟှမျးယငျ(ငျ) ရှာ့ဆဈဇိုကျzလိုငျ
☞ ကောငျးပါပွီ၊ ဒီမှာပါ။ နောကျလညျး လာအားပေးပါ။
စကားပုံများ ( ၃၁ - ၄၀ )။
1:58 AM C-Idiom , Chinese
တရုတ်နဲ့ မြန်မာက စကားပြောပုံစံတွေမှာ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆတွေ အတော်နီးစပ်မှု ရှိပါတယ်။ ဒီစကားပုံလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။
☞ Lù yǎo zhī mǎlì, rì jiǔ jiàn rén xīn.
☞ လုယောင်ကျီးhမာလိ ရွတ်rကျိုကျန့်ရဲင်rရှင်း
☞ လူအကြောင်း ပေါင်းမှသိ၊ ရွှေအကြောင်း ဖယောင်းမှသိ။
☞ Nòng jiǎ chéng zhēn.
☞ နုံ့(င်)ကျာ ချဲင်h(င်)ကျဲင်းh
☞ အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်။
☞ Zhīdào shì bǎo, bù zhīdào shì cǎo.
☞ ကျီးhတောက်ရှစ်hပေါင် ပုကျီးhတောက်ရှစ်hဆောင်
☞ သိသူဖော်စား၊ မသိသူကျော်သွား။
☞ Gū zhǎng nán míng.
☞ ကူးကျန်h(င်) နန်းမျင်(င်)
☞ လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်တာပါ။
☞ Yuǎn zài tiānbiān, jìn zài zhǐchǐ.
☞ ယွမ်ဇိုက်zထျန်းပြန်း ကျင့်ဇိုက်zကျီးhချီh
☞ လာချင်ရင် အနီးလေး၊ မလာချင်ရင် ခရီးဝေး။
☞ Yì yán jì chū, sì mǎ nán zhuī.
☞ ယိယန်ကျိချူးh စွတ်မာနန်ကျွေးh
☞ ကြမ်းကျွံ နှုတ်ရ၊ စကားကျွံ နှုတ်မရ။
☞ Huàn dé huàn shī.
☞ ဟွမ့်တဲယ် ဟွမ့်ရှီးh
☞ မရှိတောင့်တ၊ ရှိကြောင့်ကြ။
☞ Chuán dào qiáotóu zìrán zhí.
☞ ချွမ်hတောက်ချောင်းထို ဇစ်zရန်းrကျီh
☞ အချိန်တန်ရင် နွားပိန်ကန်လိမ့်မယ်။
☞ Bā zì hái méi yì piě.
☞ ပါးဇစ်z ဟိုင်မေးယိဖျယ်
☞ ဝမရှိဘဲ ဝိမလုပ်နဲ့။
☞ Guò hé chāi qiáo.
☞ ကော့ဟဲယ် ချိုင်းhချောင်
☞ ဘုရားပြီး ငြမ်းဖျက်။ စားပြီး ခွက်မှောက်။
စကားပုံမြား ( ၃၁ - ၄၀ )။
တရုတျနဲ့ မွနျမာက စကားပွောပုံစံတှမှော အတှေးအချေါ၊ အယူအဆတှေ အတျောနီးစပျမှု ရှိပါတယျ။ ဒီစကားပုံလေးတှကေို လလေ့ာကွညျ့ပါ။
☞ လုယောငျကြီးhမာလိ ရှတျrကြိုကနျြ့ရဲငျrရှငျး
☞ လူအကွောငျး ပေါငျးမှသိ၊ ရှအေကွောငျး ဖယောငျးမှသိ။
☞ နုံ့(ငျ)ကြာ ခြဲငျh(ငျ)ကြဲငျးh
☞ အပကျြအပကျြနဲ့ နှာခေါငျးသှေးထှကျ။
☞ ကြီးhတောကျရှဈhပေါငျ ပုကြီးhတောကျရှဈhဆောငျ
☞ သိသူဖျောစား၊ မသိသူကြျောသှား။
☞ ကူးကနျြh(ငျ) နနျးမငျြ(ငျ)
☞ လကျခုပျဆိုတာ နှဈဖကျတီးမှ မွညျတာပါ။
☞ ယှမျဇိုကျzထနျြးပွနျး ကငျြ့ဇိုကျzကြီးhခြီh
☞ လာခငျြရငျ အနီးလေး၊ မလာခငျြရငျ ခရီးဝေး။
☞ ယိယနျကြိခြူးh စှတျမာနနျကြှေးh
☞ ကွမျးကြှံ နှုတျရ၊ စကားကြှံ နှုတျမရ။
☞ ဟှမျ့တဲယျ ဟှမျ့ရှီးh
☞ မရှိတောငျ့တ၊ ရှိကွောငျ့ကွ။
☞ ခြှမျhတောကျခြောငျးထို ဇဈzရနျးrကြီh
☞ အခြိနျတနျရငျ နှားပိနျကနျလိမျ့မယျ။
☞ ပါးဇဈz ဟိုငျမေးယိဖယျြ
☞ ဝမရှိဘဲ ဝိမလုပျနဲ့။
☞ ကော့ဟဲယျ ခြိုငျးhခြောငျ
☞ ဘုရားပွီး ငွမျးဖကျြ။ စားပွီး ခှကျမှောကျ။
စကားပုံများ ( ၂၁ - ၃၀ )။
စကားပုံများ ( ၁၁ - ၂၀ )။